ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို အကြမ်းမဖက်ခုခံရေး- ရှုထောင့်မျိုးစုံကို ရှာဖွေခြင်း - ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု
ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှု- ရှုထောင့်မျိုးစုံကို ရှာဖွေခြင်း။
ဧပြီလ 1, 2022 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
ယူကရိန်း လမ်းလုပ်သားတစ်ဦးသည် ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်၏ မျက်နှာကို ဖြတ်သွားသည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ယူကရိန်းအခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီးဌာန၏ လက်ရုံးဖြစ်သည့် Ukravtodor သည် ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချပြီး ရုရှားတပ်များကို လမ်းလွဲစေရန် လမ်းဆိုင်းဘုတ်များကို ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။ (ဓာတ်ပုံ- Facebook / Ukravtodor)
မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ယူကရိန်းအရပ်သား ၁၂၀၀ ကျော် ကလေးပေါင်း (၁၁၂) ဦး ရှိပြီး အဲဒီအထဲမှာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းမျိုးစုံကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒုက္ခသည် ၆၅ သန်း နိုင်ငံတွင်းမှ ထွက်ပြေးလာသူများ (အများစုမှာ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ) နှင့် အခြား 6.5 သန်းမှာ ပြည်တွင်း အိုးအိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းသည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ သံတမန်ရေးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် စီးဆင်းမှုများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ဖြင့် အကျပ်အတည်းကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ စစ်ရေးအကူအညီ. ကြိုတင်မှန်းဆချက်များအရ စစ်ပွဲသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စစ်အသုံးစရိတ်များ တိုးမြင့်လာစေသည်။ ဂျာမဏီက ဘီလီယံ 100 ပေးတယ်။ ၎င်း၏ ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် သမ္မတဘိုင်ဒင်က ဒေါ်လာ ၇၅၃ ဘီလီယံ စစ်ဘက်အသုံးစရိတ် တောင်းခံခြင်း ("ယမန်နှစ်မှ စစ်အသုံးစရိတ် 753% တိုးလာမှုသည် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာများအတွက် ဘတ်ဂျက်တစ်ခုလုံးအတွက် တောင်းဆိုထားသည့် $2022 ဘီလီယံထက် ပိုများသည်" - အမျိုးသားဦးစားပေးစီမံကိန်း).
နောက်ကျောကိုဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ Daniel Hunter က သုံးသပ်သည်။ “ကြိုတင်မှန်းဆချက်ကတော့ အနောက်နိုင်ငံတွေက စာနယ်ဇင်းအများစုက ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကို ခုခံဖို့ ယူကရိန်းသံတမန်ရေး ဒါမှမဟုတ် စစ်ရေးအရ ခုခံရာမှာ ကင်းလှည့်ဖို့နဲ့ ကာကွယ်ဖို့ ပုံမှန်နိုင်ငံသားတွေကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးတာမျိုး၊ ကမ္ဘာကြီးသည် စစ်ပွဲအခြေအနေတွင် ကာကွယ်ရေး၊ ဟန့်တားရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက် တစ်ခုတည်းသော လက်နက်အဖြစ် ယေဘုယျအားဖြင့် ထင်မြင်ယူဆထားသည့် စစ်ရေးတုံ့ပြန်မှု၏ အခြားရွေးချယ်စရာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်၊ အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှု သည် ဤတူညီသော လုပ်ငန်းဆောင်တာ အများအပြားကို နှင့် များစွာသော သာဓကများဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြောင်း သုတေသနပြုချက်များက ဖော်ပြသည်။ ပိုထိရောက်နိုင်ပါတယ်။.
ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာပေးသူများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး သုတေသီများအနေနှင့် အကြမ်းဖက်မှုအပေါ် တုံ့ပြန်မှုများကို အပြည့်အ၀ ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အရေးကြီးပါသည်။ Gene Sharp သည် သူ၏ စူးစမ်းရှာဖွေမှုတွင်၊ အရပ်သားအခြေခံကာကွယ်ရေးအကြမ်းမဖက်တိုက်ပွဲနှင့် ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်အတွက် စစ်ရေးတိုက်ပွဲများ၏ ထိရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် တူညီသောစံနှုန်းများကို အသုံးပြုသင့်သည်- အန္တရာယ်အဆင့်က ဘယ်လောက်လဲ။ အန္တရာယ်ဆိုတာဘာလဲ။ လူမှုရေးနဲ့ စီးပွားရေး ကုန်ကျစရိတ်တွေက ဘာတွေလဲ။ အကြမ်းမဖက်သော စွက်ဖက်မှုတစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စစ်ရေးတုံ့ပြန်မှုမှ ကြီးမားသော တုံ့ပြန်မှုမှ အသက်ဆုံးရှုံးမှုသည် ပိုနည်းသည် ဟု ခန့်မှန်းထားပါသလား။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုက်ပွဲဖြစ်ရင် ကုန်ကျစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲ။ ကျရှုံးမှုကုန်ကျစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲ။ အကျိုးကျေးဇူးတွေက ဘာတွေလဲ။ ကျင့်ဝတ်နဲ့ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုတွေက ဘာတွေလဲ။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး အနေအထားကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ အနာဂတ် အကျိုးဆက်များကား အဘယ်နည်း။
ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးဆိုင်ရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကမ်ပိန်းသည် ယူကရိန်းတွင် အကြမ်းမဖက် ခုခံမှုဆိုင်ရာ ရှုထောင့်များနှင့် ဇာတ်လမ်းများ စုစည်းမှုအောက်တွင် စုစည်းထားသည်။ အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှု ဖြစ်နိုင်ချေများကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားကာ၊ အထက်ဖော်ပြပါ စံနှုန်းများကို ကျင့်သုံးကာ သင့်ကိုယ်ပိုင် အကြံဉာဏ်များ ချမှတ်ရန် အားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ယူကရိန်းတွင် အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်များရှိပါက၊ အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ၎င်းတို့ကို မျှဝေပါ။
(*ယူကရိန်းစစ်ပွဲအကြောင်း ထပ်လောင်းဖော်ပြချက်နှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။.)
ယူကရိန်းတွင် ရဲရင့်သော အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုကို ပံ့ပိုးရန် နည်းလမ်း ၅ ခု
Eli McCarthy မှ
အစိုးရနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများသည် အကြမ်းဖက်မှုများ၏ အရှိန်အဟုန်ကို ချိုးဖျက်ရန်နှင့် ယူကရိန်းတွင် ပိုမိုတည်တံ့သော တရားမျှတသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ရန် ချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - အကြမ်းမဖက်မှု ဆင်နွှဲခြင်း။ မတ် ၂၃၊ ၂၀၂၂)
ယူကရိန်းစစ်ပွဲသည် လူသားနှင့် ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာ ကပ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြီးစားအကြမ်းဖက်မှု တားဆီးရေးအတွက် လူမှုရေးအခြေအနေများကို ကျွန်ုပ်တို့ မဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါ။ ရန်လိုမှုနှင့် မယုံကြည်မှုကို တိုးမြင့်လာစေသည့် ခြိမ်းခြောက်မှု၊ အပြစ်တင်မှုနှင့် လက်စားချေမှုသံသရာမှ ကျွန်ုပ်တို့ မလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါ။ သက်ဆိုင်ရာကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ မူလဇစ်မြစ်နှင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ အဓိကသက်ဆိုင်သူများထံမှ အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လူသားလိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးသော သံခင်းတမန်ခင်းတွင် အပေးအယူလုပ်လိုစိတ်၊ အပေးအယူလုပ်လိုစိတ်နှင့် အသက်ကယ်တင်ခြင်းအပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှုတို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြမ်းမဖက်သော ပဋိပက္ခ၊ ခုခံရေးနှင့် အရပ်သားအခြေပြု ကာကွယ်ရေးတွင် လူများကို လုံလောက်စွာ လေ့ကျင့်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ဒီအမှားတွေကို ထပ်ပြီးလုပ်လို့မရတော့ဘူး။
သို့သော် ဤကျရှုံးမှုများအားလုံးရှိနေသော်လည်း မျှော်လင့်ချက်လက္ခဏာများ ရှိနေသေးသည်။ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသော၊ ရဲရင့်သော၊ အကြမ်းမဖက်သောနည်းလမ်းမျိုးစုံကို စတင်အသက်သွင်းနေပြီး ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများနှင့် အခြားသူများမှ ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများက ပိတ်ဆို့ထားသည်။ ယာဉ်တန်းများ နှင့် တင့်ကားများ၊ သူတို့မြေပေါ်မှာ ရပ်နေတယ်။ သတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့တောင် မြို့များစွာ, တွင် Berdyansk နှင့်Kulykіvka လူတွေက ငြိမ်းချမ်းရေး ချီတက်ပွဲတွေကို စီစဉ်ပြီး ရုရှားစစ်တပ်ကို ထွက်သွားဖို့ စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။ ရာပေါင်းများစွာ ခိုးယူမှုကို ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ မြို့တော်ဝန်တစ်ဦးလည်း ရှိခဲ့ဖူးသည်။ Kherson တွင်ဆန္ဒပြမှုများ ခွဲထွက်နိုင်ငံအဖြစ်သို့ဆန့်ကျင်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများသည် ရုရှားစစ်သားများနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လျှော့ပါ။ နှင့် လှည့်ကွက်များကိုလှုံ့ဆော်. လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများ (နှင့်အတူ ရှေးရိုးဘာသာဝင်များ အစောင့်အကြပ်များအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း) နှင့် နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များအဖွဲ့မှ ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း။
ရုရှားနိုင်ငံသားများသည် စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး လူပေါင်း ၁၅၀၀၀ ခန့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ သတင်းသမားတွေ ရှိတယ်။ ကြားဖြတ် နှင့် နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံမှ နှုတ်ထွက်ခဲ့သည်။. ရုရှားနိုင်ငံသား 100,000 နီးပါး ကဏ္ဍအသီးသီးမှ စစ်ပြေငြိမ်းရေး အသနားခံစာများ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အရပ်ရပ်မှ ရုရှားလူမျိုးများသည် စစ်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ စစ်ရေး နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ရုရှားအဖွဲ့ဝင်များထံ ရေနံလုပ်ငန်းနှင့် ဘီလီယံနာများရုရှက ၃၀၀ နီးပါး၊ ရှေးရိုးဓမ္မဆရာများ . အဲဒီအချိန်မှာ ၁၀၀ ကျော်တယ်။ စစ်သားတွေက ငြင်းတယ်။ ပါဝင်ရန်။
ပြင်ပပံ့ပိုးကူညီမှုမှတစ်ဆင့် အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုပုံစံများတွင် အဓိကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၏ လူထုထုတ်ပြန်ချက်များကို သွန်းလောင်းခြင်း၊ ရန်လိုသူထံ ငွေစီးဆင်းမှုကို လျှော့ချခြင်း - ဘဏ်စာရင်းအေးခဲခြင်းမှတစ်ဆင့် လျှော့ချခြင်း၊ အွန်လိုင်းမီဒီယာ ငွေရှာခြင်းကုန်သွယ်မှုလျှော့ချခြင်း၊ ရုရှားရုပ်ကြွင်းလောင်စာအသုံးပြုမှု လျှော့ချခြင်းနှင့် သင်္ဘောများပိတ်ဆို့ခြင်း။ ရုရှားကုန်ပစ္စည်းများ။ တခြားပုံစံတွေကတော့ ရုရှားမှာ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူတွေကို ထောက်ခံတာ၊ နည်းပညာစနစ်များကို အနှောင့်အယှက်ပေးသည်။ ရန်လိုသူနှင့် မဟုတ်မမှန်သတင်းများကို နှောက်ယှက်ခြင်း။. အခြားအရေးကြီးသောပုံစံမှာ ညွန့်ပေါင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ အဓိကအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်များ (အားကစားသမားများ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် စီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းရှိသူများအပါအဝင်) နှင့် ဒုက္ခသည်များကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူ ကျယ်ပြန့်သော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ ပါဝင်သည်။
ရုရှားလူမျိုးများအပါအဝင် အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူများသည် ရှုပ်ထွေးမှု၊ အလားအလာရှိသော အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့် သာမာန်လူသားဖြစ်မှုကို ဆက်သွယ်ပေးသည့် အညွှန်းများနှင့် ဇာတ်ကြောင်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပြန်လည်လူသားဆန်လာခဲ့သည့် အခိုက်အတန့်အချို့ရှိခဲ့သည်။ လက်စားချေနိုင်သော တရားမျှတမှုမှ ဝေးကွာပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ တရားမျှတမှုဆီသို့ ကူးပြောင်းရာတွင် ထိခိုက်နစ်နာမှုအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အတူ ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာအချို့ကို မျှဝေပေးလျှက်ရှိပါသည်။ အကြမ်းမဖက်သော အရပ်သားအခြေခံ ကာကွယ်ရေး ပြီးတော့ ငါတို့အစိုးရကို ဆော်သြတယ်။ အရင်းအမြစ်နှင့် အကြမ်းမဖက်သော လှုပ်ရှားမှုကို ချဲ့ထွင်ပါ။ ယူကရိန်းမှာ။ ထို့အပြင် အချို့သော ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် အခြားသူများက ဤအကြမ်းမဖက်မှုဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းများကို ချဲ့ထွင်ကာ စိန်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ ဓမ္မသဘောတရား စစ်ပွဲကို ထောက်ခံအားပေးသလို စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်။ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၏အခန်းကဏ္ဍ နှင့် ပဋိပက္ခတွင် လူဖြူ စိုးမိုးရေး။ အချို့က ကမ်းလှမ်းထားသော အခြားအရေးကြီးသော အလေ့အကျင့်မှာ ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများနှင့် ရန်ဘက်ပြုသူများ အတွက် အစာရှောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆုတောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
ထဲမှာ ဝါရှင်တန်ပို့စ်ဟားဗတ် တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ Erica Chenoweth ၊ ကရှင်းပြခဲ့သည် ထိုသုတေသနက “အကြမ်းမဖက်တော်လှန်ရေးသည် သတ်ဖြတ်ခြင်းကို နှောင့်နှေးမည် သို့မဟုတ် လျှော့ချနိုင်သည်၊ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကို စတင်ရန်နှင့် အနာဂတ်ရန်လိုမှုကို ဟန့်တားနိုင်ပုံကို လျှော့မတွက်မိရန်လည်း အရေးကြီးသည်ဟု အကြံပြုထားသည်။
အောက်တွင် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများအပြင် ကွန်ဂရက်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အိမ်ဖြူတော်တို့သည် အကြမ်းဖက်မှုသံသရာကို ဖြတ်ကျော်ကာ စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးဆီသို့ ဦးတည်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်ငါးဆင့်ဖြစ်သည်။
၁။ ယူကရိန်း၊ ရုရှားနှင့် အခြားနေရာများတွင် လုပ်ဆောင်နေသော အကြမ်းမဖက် ခုခံမှု၏ ရဲရင့်မှုနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုများအား ချဲ့ထွင်သင့်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ရေး မဟာမိတ်အဖွဲ့ အနေဖြင့်လည်း အကူအညီ ပေးနိုင်သည်။ ညှိနှိုင်းရေးဗဟိုများ ထူထောင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် သံတမန်ရေးရာ၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပေးရန်အပြင် အဆိုပါ အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်များနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ အတွက် အရင်းအမြစ်များ ပံ့ပိုးပေးရန် အခြားသူများကို တောင်းဆိုပါ။ ယင်းက အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှု၏ ဒိုင်းနမစ်များဆီသို့ ခိုင်မာသော စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို နှစ်ဆထိရောက်စေပြီး၊ တာရှည်ခံ ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်ဖို့ ၁၀ ဆ ပိုများပါတယ်။
2. အလှူရှင်များ၊ အစိုးရများနှင့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံမှ ၎င်းတို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ လက်နက်မဲ့ အရပ်သားကာကွယ်ရေး အရပ်သားများကို အကြမ်းမဖက် ကာကွယ်ရန်။ လက်နက်မဲ့ အရပ်သားကာကွယ်ရေး သို့မဟုတ် UCP သည် အရပ်သားများကို အကြမ်းမဖက်သောတိုက်ရိုက်ကာကွယ်ရေး၊ ဒေသအလိုက် အကြမ်းဖက်မှုများ လျှော့ချရေးနှင့် လက်နက်မဲ့၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားထားသော အရပ်သားများအား အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခများတွင် ဒေသခံအရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် လက်နက်မဲ့ အရပ်သားကာကွယ်ရေးအတွက် အထောက်အထားအခြေခံဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်သည် USAID စီမံခန့်ခွဲသူနှင့် တိုင်ပင်ကာ၊ UCP အတွက် ရန်ပုံငွေများပံ့ပိုးပေးရန် 2022 Consolidated Appropriations Act of XNUMX ပါရှိသည့် ၎င်း၏ ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကွန်ဂရက်က ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
3. ရန်ဘက်များ အပါအဝင် သက်ဆိုင်သူအားလုံးသည် ပြန်လည် လူသားဆန်ရန် လိုအပ်သည်။ သင်အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ထားသော ဘာသာစကား၊ အညွှန်းများနှင့် ဇာတ်ကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်သည်။ ခက်ခဲသော်လည်း၊ လူများ သို့မဟုတ် အုပ်စုများကို “မကောင်းသော၊” “ယုတ်မာသော၊” “ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိသော၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်များကို သဘောတူသည် သို့မဟုတ် တရားမျှတသည်ဟု မဆိုလိုပါ။ သို့တိုင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများကို လူသားများကို နှိမ့်ချလေလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပိုတိုးလာလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကူးဉာဏ်ကို ကျဉ်းမြောင်းစေပြီး အကြမ်းဖက်မှု၏ ဒိုင်းနမစ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
4. ယူကရိန်းသမ္မတ Zelensky သည် စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရန်အတွက် ရုရှားနှင့် အဆင့်တစ်သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးရန် တိုက်တွန်းသင့်သည်။ ၎င်းသည် အရင်းခံအကြောင်းတရားများကို မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်နှင့် ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သော တရားမျှတသောငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှာဖွေရန် ထဲထဲဝင်ဝင်စဉ်းစားရန် နေရာဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။ ရုရှားခေါင်းဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏ ကျူးကျော်မှုအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ သို့တိုင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအချက်တွင် အကျင့်စာရိတ္တမြင့်မားသောနေရာယူရန် Zelensky အပေါ် သြဇာပိုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယူကရိန်းသည် ကြားနေဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးရှိဖွယ်ရှိသည်။ အနည်းဆုံး အသက်ထောင်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်ဖို့။
5. ဗျူဟာလှိုင်းတစ်ခု ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ သို့မဟုတ် ရန်လိုမှုများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်အတွက် အချိန်နှင့် အာကာသ သို့မဟုတ် ငြိမ်းချမ်းရေးဇုန်များ ထုတ်ပေးရန်အတွက် ယူကရိန်းသို့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လေယာဉ်ပျံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းတွင် ယူကရိန်းတွင် ဆေးဝါးနှင့် အစားအစာများ ပြည့်နေသော ကုန်တင်လေယာဉ်ကြီးများ ဆင်းသက်သည့် မဟာမိတ်နိုင်ငံတစ်ခု သို့မဟုတ် အများအပြား ပါဝင်နိုင်သည်။ ထိပ်တန်းအစိုးရ (ဒါမှမဟုတ် ဘာသာရေး သို့မဟုတ် အခြား) အရာရှိများပါ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ကုန်တင်လေယာဉ်များသည် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်လေယာဉ်များမဟုတ်ပါ။ ပူတင်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဂျော်ဂျီယာကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့စဉ်က လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လေယာဉ်ပျံကို အမေရိကန်က အတိအကျ ကွပ်မျက်ခဲ့သည်။ သိသိသာသာ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ထိုရန်လိုမှုများ၏အဆုံးတိုင်အောင်။
တက်ကြွသောအကြမ်းမဖက်ခြင်းသည် ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတစ်ဦးကဲ့သို့ အမှန်တကယ်ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင် အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုကို အားကိုးသောသူများကို ရှုံ့ချခြင်း သို့မဟုတ် စီရင်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ တရားမျှတမှုကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုခြင်းထက် ၎င်းတို့၏ဆန္ဒကို အခိုင်အမာ အသိအမှတ်ပြု လေးစားပါသည်။ တက်ကြွသောအကြမ်းမဖက်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများနှင့် အခြားသူများ၏ ဖန်တီးမှု၊ ရဲရင့်မှု၊ အကြမ်းမဖက်သော နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် တွဲဘက်အကြောင်းဖြစ်သည်။
ပုံတစ်ပုံဆွဲသည် ငြိမ်းချမ်းရေးမူဘောင်ပဲ ရှိတယ်။ ဤအကြမ်းမဖက်ဖြစ်နိုင်ချေများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာမြင်နိုင်ရန် ကူညီပေးပြီး ၎င်းတို့၏ဦးတည်ချက်ဆီသို့ ကျွန်ုပ်တို့ကို ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်သည် ရန်လိုမှု၊ လူသားဆန်မှုပြုခြင်းနှင့် အန္တရာယ်ပြုခြင်းတို့ကို ပုံမှန်အားဖြင့် တိုးမြင့်လာစေပြီး ၎င်းသည် ရေရှည်စိတ်ဒဏ်ရာနှင့် အကြမ်းဖက်မှု၏ အခြားသံသရာများကို ဖန်တီးပေးကြောင်းလည်း ၎င်းမှ ကျွန်ုပ်တို့အား သိမြင်လာစေပါသည်။ ဤရွေ့လျားမှုတွင် နောက်ထပ်လူများ သေဆုံးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရုရှားသည် ယခုအခါ အရပ်သားဒေသများကို ပိုမိုဗုံးကြဲနေပါသည်။ တစ်ဖန်၊ တရားမျှတသော ငြိမ်းချမ်းရေးမူဘောင်သည် အကြမ်းဖက်မှု၏ တက်ကြွမှုကို ချိုးဖျက်နိုင်ပြီး ပိုမိုတည်တံ့သော တရားမျှတသော ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နိုင်ပုံကို အာရုံစိုက်ရန်လည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။ ဒီအဆင့်ငါးဆင့်ကို လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီး စစ်ပွဲရဲ့အလေ့အထကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ နည်းလမ်းရှာကြည့်ရအောင်။
Eli S. McCarthy, PhD Georgetown University မှ Justice and Peace Studies မှ ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်သည်။ 2012 ခုနှစ်ကတည်းက သူသည် သူ၏လတ်တလောစာအုပ်ဖြစ်သည့် A Just Peace Ethic Primer: Building Sustainable Peace and Breaking Cycles of Violence (2020) တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု၊.
ယူကရိန်းတွင် စစ်ပွဲကို ခုခံခြင်း- လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ သတင်းများ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများနှင့် အကြမ်းမဖက်မှုအတွက် အရင်းအမြစ်များ
Metta Center for Nonviolence မှ
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - အကြမ်းမဖက်ဘို့မေတ္တာ Center က.)
ပေါ်တွင် အပြည့်အဝ မွမ်းမံထားသော အရင်းအမြစ်များစာရင်းကို ကြည့်ပါ။ Metta Center for Nonviolence ဝဘ်ဆိုဒ်.
ရုရှားပြည်တွင်းနှင့် ရုရှားနိုင်ငံသားများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ
ယူကရိန်းမှာ စစ်မှုမထမ်းမနေရ စစ်သားစုဆောင်းရေးရုံးကို ရုရှားက မီးရှို့ဖျက်ဆီး၊
ရုရှားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် အနုပညာရှင်များသည် မြို့၏နံရံများပေါ်တွင် အမည်မသိနှင့် အဖျက်သမားအမြင်များကို မျှဝေရန်အတွက် မှုတ်ဆေးများကို အသုံးပြုကြသည်။
ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို ဆန္ဒပြတဲ့ ရုရှားသတင်းတွေကို အမျိုးသမီးက နှောင့်ယှက်တယ်။
ရုရှား၏ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူများသည် ကြောက်လန့်တကြား ချီတက်နေကြဆဲဖြစ်သည်။
မော်စကိုတွင် စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူတစ်ဦးက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းသည် ထိုက်တန်သည်ဟု ဆိုသည်။
ရုရှားနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ ဆန္ဒပြမှုတွေ ကြီးထွားလာတာကြောင့် လူပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
ယနေ့နံနက်တွင် စိန့်ပီတာစဘတ်ရှိ Moyka မြစ်ပေါ်တွင်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် မြစ်၏ရေခဲပြင်ပေါ်တွင် “စစ်ပွဲမှမရှိပါ” ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
“စစ်မဖြစ်ရန်”- ရုရှားတီဗီချန်နယ်မှ ဝန်ထမ်းအားလုံး တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုမှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
စစ်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး ရုရှား FSB အေးဂျင့်များသည် Zelensky အား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှု သုံးခုကို တားဆီးရန် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း ယူကရိန်းဆိုသည်။
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များမှ ဆန္ဒပြမှုများ၊ အသနားခံစာများနှင့် ထုတ်ပြန်ချက်များသည် ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းမှ စစ်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သည့် ကြီးမား၍ ရဲရင့်သော၊
ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို ရုရှားက ဆန့်ကျင်နေတယ်။ (ရုရှားနှင့် အင်္ဂလိပ်လို ရှည်လျားသောအရင်းအမြစ်)
ရုရှား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင် ပူတင်၏ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူများနှင့် အမှီအခိုကင်းသော မီဒီယာများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း အကြောင်းကို ပြောဆိုသည်။
RU ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် Yandex ၏ ထိပ်တန်းမန်နေဂျာသည် စစ်နှင့်ပတ်သက်သော အမှန်တရားကို ပိတ်ဆို့ရန် ၎င်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံမှာ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပင်စင်စားတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
အချို့သော ရုရှားလူမျိုးကြီးများသည် စစ်ဆန့်ကျင်ရေးကို သတိကြီးကြီးထားပြီး ပြောဆိုကြသည်။
စစ်ပွဲမှာ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ရုရှားမိခင်တွေနဲ့ ကလေးတွေကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
ရုရှားဘီလျံနာသူဌေး Roman Abramovich သည် Chelsea FC ကိုရောင်းချရန် - ယူကရိန်းရှိဒုက္ခသည်များကိုကူညီရန်ဆက်လက်လှူဒါန်း
ယူကရိန်းမှာ တပ်စွဲထားတဲ့ သားတွေရဲ့ ကံကြမ္မာကို သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ ကော်မတီက ခြေရာခံနေပါတယ်။
Revolut Fintech App ၏ နောက်ကွယ်မှ ရုရှားဘီလျံနာသူဌေးသည် စစ်ဆန့်ကျင်ရေးစာ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုအတွက် ရုရှားအရာရှိက တောင်းပန်သည်။
ရုရှားတပ်ဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ငွေ့ကန်များတွင် 'အပေါက်များကို တမင်တကာ ထိုးဖောက်ခြင်း' ရှိသည်။
ရုရှားနိုင်ငံသား ထောင်ပေါင်းများစွာသည် စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ရှောင်တိမ်းရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည်။
ယူကရိန်းမှာ စစ်ပွဲအတွက် ရုရှ တာဝန်ရှိသူက ကုလသမဂ္ဂ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲမှာ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။
ပူတင်၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများကြားတွင် ရုရှားနိုင်ငံသားများသည် စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ချီတက်ပွဲများ ကျင်းပကြသည်။
ယူကရိန်း အာဏာပိုင်များက တိုက်ခိုက်ရန် တောင်းဆိုသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ယူကရိန်း အာဏာပိုင်များက မျှဝေထားသောကြောင့် ထိန်းသိမ်းခံထားရသော ချစ်မြတ်နိုးရသူများကို ရုရှားနိုင်ငံသားများ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
#ရုရှားနိုင်ငံ Belgorod မြို့မှာ ရုရှားကန်ထရိုက်တပ်သား ၅၀၀၀ က ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီး #ယူကရိန်းမှာ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ Obozrevatel က ဖော်ပြပါတယ်။
'ရုရှားသည် စစ်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သည်'- ရှားရှားပါးပါး သဘောထားကွဲလွဲမှု ပြပွဲတွင် ထောင်နှင့်ချီသော လူထုစုဝေးပွဲ Al Jazeera, 2.24
ရုရှားအကြီးတန်းအရာရှိ ၁၅၀ ကျော်သည် ပူတင်၏ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ရှုတ်ချပြီး နိုင်ငံသားများအား 'မပါဝင်ရန်' တိုက်တွန်းရင်း 'ကပ်ဘေးဆိုးကျိုးများ' ကို သတိပေးကာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ယူကရိန်းစစ်ပွဲကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ရုရှားသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ သိပ္ပံသတင်းထောက် ၆,၁၅၀ ကျော်ရဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်း ရုရှားနိုင်ငံသား ၁၇၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
ယူကရိန်းစစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရန် ရုရှားနိုင်ငံသား 900,000 ကျော် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ရုရှားတင်းနစ်အကျော်အမော် Andrey Rublev သည် ဒူဘိုင်းဆီးမီးဖိုင်နယ်တွင် အနိုင်ရပြီးနောက် 'No War Please' ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
ယူကရိန်းအတွင်း နိုင်ငံသားနှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များ*
ရုရှားစစ်သားတွေက ယူကရိန်းမြို့တော်ဝန်ကို ပြန်လွှတ်ပေးပြီး ဆန္ဒပြမှုတွေအပြီး ထွက်ခွာဖို့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
*ဖမ်းဆီးခံရသော ရုရှားစစ်သားများက ၎င်းတို့၏အခြေအနေအကြောင်းပြောနေသည့် ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းများကို ချိုးဖောက်နိုင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖယ်ရှားလိုက်ပါသည်။ ၎င်းအကြောင်းကို ဤနေရာတွင် သင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Rivne ဒေသရှိ Dubno မြို့နှင့် အနီးနားရှိ ကျေးရွာများမှ နေထိုင်သူများသည် Kyiv နှင့် ဒေသရှိ ဆေးရုံများသို့ ပေးပို့ရန် ဖက်ထုပ် ၂.၅ တန် (!) ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ရုရှားက မြို့ကိုသိမ်းပြီး ရက်အကြာတွင် ရာနှင့်ချီသော ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများသည် Kherson တွင် ကျူးကျော်မှုကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ကြသည်။
အရပ်သားတွေ အော်ဟစ်ပြီး ရုရှားစစ်တပ်ကို အဝေးကွင်းမှာ ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံမှ Zelensky မှ ရုရှားလူမျိုးများထံ- 'မင်းက ဘာအတွက်နဲ့ ဘယ်သူနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတာလဲ'
ပူတင်၏ကျူးကျော်မှုအတွင်း ဖမ်းမိထားသော ၎င်းတို့၏သားများကို ယူကရိန်းနိုင်ငံသို့ ခေါ်ဆောင်လာရန် ရုရှားမိခင်များကို ယူကရိန်းက တောင်းဆိုထားသည်။
အလုပ်သမားများနှင့် နိုင်ငံသားများသည် ရုရှားစစ်တပ်မှ နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံသို့ သွားသည့်လမ်းကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။
မြေမြှုပ်မိုင်းကို လက်ဗလာဖြင့် ဖယ်ရှားသည်ဟု လူတစ်ဦးက စွပ်စွဲသည်။
ရုရှားစစ်တပ်ကို သိမ်းပိုက်ရန် စာတိုပေးပို့ရန် လမ်းဆိုင်းဘုတ်များ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ယူကရိန်းနယ်စပ်တွင် မိခင်တစ်ဦးသည် သူစိမ်း၏ကလေးများကို ဘေးလွတ်ရာသို့ ခေါ်ဆောင်လာသည်။
ရုရှားစစ်ယာဉ်တန်းကို ပိတ်ဆို့ရန် ကြိုးစားနေသည့် ယူကရိန်း တင့်ကားသမား ဗီဒီယိုဖိုင် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
လောင်စာဆီကုန်သွားတဲ့ ရုရှားတင့်ကားကို ရုရှားဆီ ပြန်ဆွဲတင်ဖို့ ယူကရိန်းအမျိုးသားက ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်။
ပြင်းထန်သော ပဋိပက္ခများတွင် အကြမ်းမဖက်သော ရွေးချယ်မှုအဖြစ် "ပျံသန်းခြင်း"၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံသား 425k ကျော် နိုင်ငံမှ ထွက်ပြေး
အကြောက်တရားကင်းမဲ့သည့်လက္ခဏာတွင် လက်နက်မဲ့အမျိုးသမီးက ရုရှားစစ်သားထံ မက်ဆေ့ခ်ျတစ်စောင်ပေးပို့ကာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေက ရုရှားတင့်ကားတွေကို အုပ်စုလိုက် ရပ်ခိုင်းတယ်။
လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်တင်ပေးရင်း ယူကရိန်းလယ်သမားက သူ့ထွန်စက်ကို အသုံးပြုပြီး ရုရှားတင့်ကားကို ခိုးယူခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။
ကိယက်ဗ်ရှိ အကြမ်းမဖက်ရေးအဖွဲ့အစည်း- အရပ်သား ၂၀၀၀ သေဆုံးမှုအဖြစ် ရုရှားကျူးကျော်မှုကို ခုခံမှုတိုးလာ
ကမ္ဘာသို့ ယူကရိန်းနိုင်ငံ ပါစီစစ်၏ သဝဏ်လွှာ- အမေရိကန်၊ နေတိုးနှင့် ရုရှားတို့ စစ်ရှောင်ရန် တာဝန်ရှိကြောင်း မျှဝေသည်။
ယူကရိန်းကို ရုရှားကျူးကျော်မှုမှ လွတ်မြောက်ရန် အသားရောင်ရှိသူများ ရုန်းကန်နေရသည်။
“ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများသာ”- နိုင်ဂျီးရီးယားကျောင်းသား စစ်ပွဲသည် နယ်စပ်ရှိ အာဖရိကန်လူမျိုးများအပေါ် ပြင်းထန်သော လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကို ဖော်ပြသည်
ဘီလာရု ရထား လုပ်သားများသည် ယူကရိန်းသို့ ဦးတည်သော မီးရထား လိုင်းများကို ယနေ့တွင် ဖြိုခွင်းခဲ့ရာ ရုရှားနိုင်ငံသားများ ရထားဖြင့် ပြန်လည် ထောက်ပံ့ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ယူကရိန်းဒုက္ခသည် ၇ ဦးကို ဂျာမဏီတွင် ရုရှားမှ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတစ်ဦးက ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ကျူးကျော်နေထိုင်သူများသည် ရုရှားလူမျိုး အကြီးအကဲတစ်ဦးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လန်ဒန်အိမ်ကြီးအား သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
ပိုလန်တွင် ဆန္ဒပြသူများသည် အီးယူနှင့် ရုရှားနှင့် ဘီလာရုစ်တို့ကြား ကုန်းလမ်းကုန်တင်သွားလာမှုကို တားမြစ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ယူကရိန်းနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပြသရန် လန်ဒန်မြို့ရှိ Trafalgar ရင်ပြင်တွင် ဂီတပညာရှင်များ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။
ပိုလန်ကို ကလေးတွေနဲ့အတူ ပိုလန်ကိုရောက်တဲ့အခါ လိုအပ်နိုင်တဲ့ ယူကရိန်းမိခင်တွေအတွက် ရထားဘူတာမှာ ပိုလန်မိခင်တွေက တွန်းလှည်းတွေထားခဲ့
Vilnius ရှိ ရုရှားသံရုံးလမ်းကို 'Ukrainian Heroes Street' ဟု အမည်ပေးမည်
ဂျော်ဂျီယာအမျိုးသားတွေဟာ ရုရှားသင်္ဘောကို လောင်စာဆီပေးဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ရုရှားလူမျိုးတွေက လောင်စာမပါဘဲ ဘာလုပ်သင့်လဲလို့ မေးတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ အဖြေက “လှော်ကားတွေအစား လှော်ကားကို အသုံးပြုပါ။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် ယူကရိန်းမှ ထောင်နှင့်ချီသော ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီများ ပေးသည်။
ယူကရိန်းသီချင်းတွေကို ဖွင့်ဖို့ ရုရှားတီဗီချန်နယ်တွေကို ဟက်ခ်ခံရတဲ့အတွက် ကရင်မလင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ပြိုကျသွားပါတယ်။
အမည်မသိသူများက ရုရှားကို တိုက်ခိုက်မှုများ လုပ်ဆောင်ပြီး 'Kremlin ၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ကျူးကျော်မှု' ကို ဆန့်ကျင်ရန် ယူကရိန်းအား ထောက်ပံ့မည်ဟု ကတိပြုထားသည်။
ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အမည်မသိ အချက်အလက် ပေါက်ကြားမှု
ပဋိပက္ခကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ လမ်းပေါ်က အနုပညာ
Greta Thunberg ၏ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအဖွဲ့သည် ယူကရိန်းကို ရုရှားကျူးကျော်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲများ စတင်ခဲ့သည်။
နည်းပညာနှင့် ကြီးမားသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ
ရုရှားက အင်တာနက်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးတာကြောင့် Starlink ဟာ ယူကရိန်းမှာ လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ Musk က ပြောပါတယ်။
Big Tech သည် ရုရှားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများကို ကြော်ငြာများဝယ်ယူခြင်းမှ တားမြစ်ထားသည်။
ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုအပေါ် ဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလီယံ အကုန်အကျခံကာ ရုရှား၏ Rosneft မှ BP ဆုတ်ခွာ
Airbnb သည် ယူကရိန်း ဒုက္ခသည် 100,000 အထိ အခမဲ့ ကာလတို အိမ်ရာများ ပေးဆောင်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည်။
TikTok စစ်ပွဲ- ယူကရိန်းကို ရုရှား၏ကျူးကျော်မှုသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏ အသက်အငယ်ဆုံးပရိသတ်အတွက် မည်သို့ကစားခဲ့သနည်း။
အထွေထွေ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုများ မပါဝင်သည့် နိုင်ငံရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ
*၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အရပ်သားများအား "ပြစ်ဒဏ်" ဖြစ်သောကြောင့် ဤစာရင်းမှ အထွေထွေ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါသည်။ ပစ်မှတ်ထား အရေးယူမှုများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
ယူကရိန်းကို ကူညီဖို့ ကုလသမဂ္ဂက ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ ခွဲဝေပေးတယ်။
ယူကရိန်းမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေအတွက် ICC က စတင်စုံစမ်းနေပါတယ်။
ကာဇက်စတန်သည် ရုရှားတို့အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရန် ယူကရိန်းသို့ တပ်ဖွဲ့များစေလွှတ်ရန် ငြင်းဆိုထားသည်။
ရုရှားသန်းကြွယ်သူဌေးကြီး Alisher Usmanov ၏ ဒေါ်လာ သန်း 600 ရှိသည့် စူပါသင်္ဘောကို ဂျာမနီ သိမ်းဆည်းရမိ
ဆွစ်ဇာလန်သည် ပူတင်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွင် ပါဝင်ရန် ယခင်က ကျင့်သုံးခဲ့သည့် အလေ့အထကို ချိုးဖောက်ခဲ့သည်။
ယူကရိန်း၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်း 'IT Army' သည် Uncharted Territory တွင် ဟက်ကာလုပ်နေသည်။
ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပူတင်၏မဟာမိတ်များက သူ့ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသည် သဘောတူညီချက်မှ ထွက်ခွာပြီး ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံရုံးသို့ သွားရောက်သည်။
ယူကရိန်းနဲ့ ရုရှားကြား ဆွေးနွေးမှုတွေကို ကူညီပေးဖို့ ဗာတီကန်က ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။
ယူကရိန်းအစိုးရက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့် ရူဘယ် ၅၀၀၀ ပေးကာ ၎င်းတို့၏ဆန္ဒအလျောက် လက်နက်ချသော စစ်သားများကို ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
'ငါတို့ မင်းကို ဂရုစိုက်မယ်' လို့ စလိုဗက်ကီးယားက ကျူးကျော်မှုကနေ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကို ပြောပါတယ်။
ကြေညာချက်များ၊ အယူခံဝင်မှုများနှင့် ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုများအပါအဝင် ညီညွတ်ရေးလက္ခဏာများ
"အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ လူတွေက ယူကရိန်းနဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့အတွက် Kokum ပဝါတွေကို ၀တ်ကြတယ်"
Gandhi Development Trust နှင့် Phoenix Settlement Trust, Ela Gandhi ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
စစ်ပွဲမရှိပါ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အသံများ၊ FOR
ယူကရိန်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့
လုပ်ဆောင်ရမည့်အချိန်ရောက်ပြီ- ရုရှားနျူကလီးယားခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ နိုဘယ်ဆုရှင် Dmitry Muratov နှင့် ICAN တို့ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်
ယူကရိန်းအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဘာသာပေါင်းစုံ ခေါ်ဆိုမှု၊ အမေရိကရှိ ဧဝံဂေလိ လူသာရန် ဘုရားကျောင်း
စစ်ပွဲသည် ခေတ်နောက်ကျနေပြီဖြစ်ပြီး အကြမ်းမဖက်ခြင်းသည် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်- ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင် ဒလိုင်းလားမား
ယူကရိန်းနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပြသသည့် အဓိကမြို့ကြီးများ- Twitter
ဂျပန်နှင့် အာရှတလွှားတွင် ယူကရိန်းအတွက် အထောက်အပံ့များ လျှံထွက်နေသည်။
ရုရှားသမ္မတ ဗော့ဒ်ကာသည် ရုရှားသမ္မတပူတင်၏ ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စင်ပေါ်မှ ဖြုတ်ချလိုက်သည်။
အမေရိကန်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် (SNL) သည် နယူးယောက်မြို့မှ ယူကရိန်း Chorus Dumka ဖြင့် ယူကရိန်းအတွက် ဆုတောင်းခြင်းကို ဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့် စတင်သည်။
ပူတင်၏ စစ်ရေးကျူးကျော်မှုကို ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ ဆန္ဒပြသူများက ရှုတ်ချကြပြီး ယူကရိန်းနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ဖော်ပြကြသည်။
ယူကရိန်းကို ရုရှားက ကျူးကျော်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Pax Christi USA ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်
ယူကရိန်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ တားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကြေညာချက်
ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ရှုတ်ချတဲ့ နျူကလီးယားလက်နက် ဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံတကာ ကမ်ပိန်း၊
စစ်ပွဲကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစပြုမှု- "စစ်ပွဲကို အရှိန်လျော့ရန် ယူကရိန်းတွင် အကြမ်းမဖက်သော အခြားရွေးချယ်စရာများကို လိုက်လုပ်ရပေမည်။"
Nonviolence International မှ စစ်ဆန့်ကျင်သူများ ခိုလှုံခွင့်တောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၂၂
Pax Christi ၏ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ထံ ပေးစာသည် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးထံမှ ကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးမှုကို ပိုမိုအားပေးပါသည်။
Sant'Egidio ၏အသိုက်အဝန်း- အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် ပန်ကြားချက်တစ်ခုနှင့် Kyiv ကို "ပွင့်လင်းသောမြို့" အဖြစ်ကြေငြာရန်။
ယူကရိန်းကို ရုရှားကျူးကျော်မှုနဲ့ နျူကလီးယားလက်နက်ခြိမ်းခြောက်မှုတွေအကြောင်း Anna Ikeda က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးက မတ်လ ၂ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကို ဤစစ်ပွဲအတွက် အစာရှောင်ဆုတောင်းသည့်နေ့အဖြစ် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများနှင့် ပူတင်- အကြမ်းမဖက်သော အရပ်သားအခြေပြု ကာကွယ်ရေးအတွက် အလားအလာ
Maciej Bartkowski အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
1900 နှင့် 2006 အကြားတွင် သိမ်းပိုက်သူများအပေါ် အကြမ်းမဖက်သော ရုန်းကန်မှုများသည် အချိန်၏ 35% အောင်မြင်ခဲ့ပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး 36% အောင်မြင်ခဲ့သည် (Chenoweth & Stephan 2011)။ ခုခံမှု အမျိုးအစား နှစ်ခုလုံးသည် မအောင်မြင်သည်ထက် မကြာခဏ မအောင်မြင်သော်လည်း အောင်မြင်ပြီး ကျရှုံးသော လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးသည် ၎င်း၏ အကြမ်းမဖက်သော အင်အားစုများထက် ပျမ်းမျှ သုံးဆ ပိုကြာပါသည်။ ဒေသခံလူဦးရေအတွက် ကြီးမားသော လူ့စွမ်းအားနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ အမြဲပါလာသည် (ဥပမာ- ဗီယက်နမ် 1960 ခုနှစ်များ)၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါးသည် (Algeria 1962)၊ ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးနှင့် ယင်း၏ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုအတွက် ခွန်အားနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ လိုအပ်နေသော အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း (ဥပမာ- ဟန်ဂေရီ 1956) ကို ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခဲ့သည်။
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - ICNC ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၂၁)
ယူကရိန်းနယ်စပ်တလျှောက်တွင် ရုရှားတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၅၀,၀၀၀ ကျော် စုရုံးပြီး ဘီလာရုစ်နှင့် ခရိုင်းမီးယားနှင့် ဒွန်ဘာစ်တို့ သိမ်းပိုက်ထားသော နယ်မြေများနှင့်အတူ ယူကရိန်းသည် ၎င်း၏ ကြီးမားသောအာဏာရှင်အိမ်နီးချင်းများ၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု အလားအလာနှင့် ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာ သိမ်းပိုက်ခြင်းတို့ကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ နယ်မြေ။
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်က ကျူးကျော်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ထဲမထားသေးဘူးလို့ အမေရိကန်နဲ့ ယူကရိန်းထောက်လှမ်းရေးဌာနတွေက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ သို့သော် အချိန်သည် အနှစ်သာရဖြစ်သည်။ ဇန်န၀ါရီနှင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလများသည် ရထားလမ်းများ၊ တံတားများနှင့် လမ်းများ ဖောက်ခွဲခံရသောအခါတွင် တိုင်ကီများ အပါအဝင် အကြီးစား စက်ယန္တရားကြီးများ သွားလာရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူပြီး မြန်ဆန်စေရန်အတွက် မြေယာများ အေးခဲနေသောကြောင့် ဇန်န၀ါရီနှင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလများသည် ကျူးကျော်ရန် အဆင်ပြေဆုံးလများဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ပူတင်သည် အလုံးစုံ စစ်ရေးအရ ကျူးကျော်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ ၎င်းသည် အနောက်နိုင်ငံများ၏ စစ်ရေးအရ အထောက်အပံ့ကို ရရှိထားသော်လည်း ၎င်း၏ ယူကရိန်းစစ်တပ်အပေါ် ၎င်း၏ အင်အားပိုကြီးသော တပ်ဖွဲ့များအပေါ် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စစ်ရေးအရ အောင်ပွဲခံမည်ဟု ယူဆသောကြောင့် ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏ ထိုးစစ်ကို ကိယက်ဗ်သို့ တလမ်းလုံး တွန်းပို့မည်ဆိုပါက လက်ရှိ ယူကရိန်းအစိုးရကို အာဏာမှ အမြန်ဖယ်ရှားပြီး ရုရှားလိုလားသော ရုပ်သေးအစိုးရဖြင့် အစားထိုးမည်ဟု ၎င်း၏ ယုံကြည်ချက်ကိုလည်း အချက်ပြမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ယူကရိန်းပြည်သူအများစုသည် ရုရှားကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုနှင့် ခရိုင်းမီးယားဒေသရှိ လူဦးရေအများစု၏ 2014 ခုနှစ်မှစ၍ Donbas နှင့် Crimea တို့တွင် ပြုမူခဲ့သည့်အတိုင်း ရုရှကျူးကျော်ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်ခံမည်ဟု ၎င်း၏အမြင်လည်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ပူတင်က ရုရှားနဲ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေဟာ တူညီတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီး ယူကရိန်းအမျိုးသားရေးဝါဒီ အထက်တန်းလွှာတွေက အချင်းချင်း ကွဲကွာနေခဲ့ကြတာပါ။ ၎င်း၏ မိန့်ခွန်းအရ ဤအထက်တန်းလွှာ အာဏာမှ ဖယ်ရှားလိုက်သည်နှင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများသည် ရုရှားနှင့် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကို ဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံကြမည်ဖြစ်သည်။
အပြည့်အ၀ကျူးကျော်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပူတင်၏တွက်ချက်မှုအပေါ် လွှမ်းမိုးရန် ယူကရိန်းနှင့် အနောက်နိုင်ငံအချို့မှ ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများသည် ကြာရှည်ပြောက်ကျားစစ်ပွဲအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ယူကရိန်းသည် ဆိုဗီယက်တို့အတွက် အာဖဂန်နစ္စတန်ဖြစ်လာသည့် ရုရှားခေါင်းဆောင်အတွက် ယူကရိန်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဤဖြစ်ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါက ရုရှားနိုင်ငံသားများအတွက် ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများအတွက် ထပ်တူထပ်မျှ နာကျင်စေမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အာဖဂန်နစ္စတန်သည် အပျက်အစီးများ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့၏ ကျူးကျော်သူများကို အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့လျှင်ပင် လူထောင်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးကာ ဒုက္ခသည်များ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ပူတင်၏ ယူဆချက်များသည် ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများအတွက် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အကျိုးဆက်များနှင့်အတူ အန္တရာယ်ရှိသော မှားယွင်းသော တွက်ချက်မှုများဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြား လက်နက်ကိုင်ကျူးကျော်မှုမှာ သင်ဘာလုပ်မလဲ။
2015 ခုနှစ်တွင် Kiev International Institute of Sociology (KIIS) မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားရေးစစ်တမ်း1 ပြည်ပက လက်နက်ကိုင်ကျူးကျော်မှုနဲ့ သူတို့နိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်မှုမှာ ခုခံရေးအတွက် ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ လိုလားချက်တွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် အကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ Euromaidan တော်လှန်ရေးနှင့် ရုရှားတပ်များက ခရိုင်းမီးယားနှင့် ဒွန်ဘတ်စ်ဒေသကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ယူကရိန်းလူထု၏ ထင်မြင်ယူဆချက်သည် အမိမြေကို လက်နက်ဖြင့် ကာကွယ်ရန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထောက်ခံမည်ဟု မျှော်လင့်နိုင်သည့်အခါတွင် အဆိုပါ စစ်တမ်းကို ကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ရလဒ်များသည် လက်နက်ကိုင်-ကာကွယ်ရေး ခုခံမှုအမျိုးအစားအတွက် အစားထိုးတစ်မျိုးအတွက် အံ့အားသင့်ဖွယ် ပြင်းထန်သော အထောက်အပံ့ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်- အရပ်သား ဦးဆောင်သော အကြမ်းမဖက် ကာကွယ်ရေး. စစ်တမ်းအရ ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများအကြား အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုတွင် ပါဝင်ရန် ရေပန်းအစားဆုံး ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်- ၂၉% သည် နိုင်ငံခြား လက်နက်ကိုင် ကျူးကျော်မှုတွင် ဤရွေးချယ်မှုကို ထောက်ခံပြီး သိမ်းပိုက်မှုတွင် ၂၆% က ထောက်ခံခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို ၂၄% နှင့် ၂၅% အသီးသီး ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ပုံ 29 ကိုကြည့်ပါ။ ယူကရိန်းနိုင်ငံသား 26% ကသာ သူ့တပ်တွေ ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်လာတဲ့အခါ ပူတင်က မျှော်လင့်ထားသလို ပြုမူပုံ- ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။
အခြားရွေးချယ်စရာများထက် အရပ်ဘက်ဦးဆောင်သော အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုကို ဖြေဆိုသူ ပိုများသော ရွေးချယ်သည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံသား သုံးပုံတစ်ပုံကျော်က ဤအစားထိုး ခုခံမှု အမျိုးအစားသည် ပြည်ပရန်သူအား ပိုမိုအားကောင်းသော စစ်အင်အားဖြင့် ၎င်းတို့၏ လူမှုအသိုက်အဝန်းကို ကာကွယ်ရန် ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယူကရိန်းနိုင်ငံသား သုံးပုံတစ်ပုံကျော်က ပို၍ပင် မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသည်။ ပုံ2ကိုကြည့်ပါ။
ဤရလဒ်များသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလောက်အောင်ပင် လုပ်ငန်းခွင်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲများ၏ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းများနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပါသည်။ 1900 နှင့် 2006 အကြားတွင် သိမ်းပိုက်သူများအပေါ် အကြမ်းမဖက်သော ရုန်းကန်မှုများသည် အချိန်၏ 35% အောင်မြင်ခဲ့ပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး 36% အောင်မြင်ခဲ့သည် (Chenoweth & Stephan 2011)။ ခုခံမှု အမျိုးအစား နှစ်ခုလုံးသည် မအောင်မြင်သည်ထက် မကြာခဏ မအောင်မြင်သော်လည်း အောင်မြင်ပြီး ကျရှုံးသော လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးသည် ၎င်း၏ အကြမ်းမဖက်သော အင်အားစုများထက် ပျမ်းမျှ သုံးဆ ပိုကြာပါသည်။ ဒေသခံလူဦးရေအတွက် ကြီးမားသော လူ့စွမ်းအားနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များ အမြဲပါလာသည် (ဥပမာ- ဗီယက်နမ် 1960 ခုနှစ်များ)၊ နောက်ပိုင်းတွင် ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါးသည် (Algeria 1962)၊ ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးနှင့် ၎င်း၏ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အတွက် ခွန်အားနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများ လိုအပ်နေသော အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း (ဥပမာ- ဟန်ဂေရီ 1956) ကို ဖျက်ဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ အကြမ်းမဖက်သော တော်လှန်ရေးသည် သမိုင်းကြောင်းအရ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်မှုထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အောင်မြင်နိုင်သည် (နီပေါ ၂၀၀၄)၊ မအောင်မြင်သော အကြမ်းမဖက်သော တော်လှန်ရေးများပင်လျှင် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ စုစည်းမှုကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် (Czechoslovakia 2004)၊ အောင်မြင်သော လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးများထက် ဒီမိုကရေစီကို တည်ဆောက်နိုင်သည် (ပိုလန် 1968s vs. Afghanistan 1980s and 1980s)။
ထို့အပြင် စစ်တမ်းအရ ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများ သည် နယ်မြေကာကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းသူများတွင် လက်နက် ကိုင်ဆောင်လိုစိတ် ပိုများသည်။ ၎င်းတို့၏ မိသားစုနှင့် ရပ်ရွာများကို ကာကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းသူများသည် အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှု နည်းလမ်းများကို ဦးစားပေးကြသည်။ ပုံ 3a နှင့် 3b ကိုကြည့်ပါ။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးသည် ဒေသခံလူထုအပေါ် ဆိုးရွားသောကုန်ကျစရိတ်များ သက်ရောက်စေမည့် ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများကြားတွင် အလိုလိုသိမြင်နားလည်မှုတစ်ခုရှိသည်။ ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်သူများအပေါ် အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အဓိကမြို့ပြကြီးများနှင့် ဝေးကွာသော အကြမ်းမဖက်ခုခံမှုကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများသည် ၎င်းတို့ပူးပေါင်းရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်စေမည့် သီးခြားလက်နက်ကိုင်နှင့် အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုအမျိုးအစားများကို ရွေးချယ်ရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လူများစုသည် အကြမ်းမဖက်သော ခုခံရေးနည်းလမ်းများ—သိမ်းပိုက်ထားသူကို အပြုသဘောဆောင်သော ခုခံမှုအထိ—အပြုသဘောဆောင်သော ခုခံမှုအထိ—အကြမ်းမဖက်သော တော်လှန်ရေးနည်းလမ်းများ—အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုနည်းလမ်းများကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်၊ ရလဒ်များအရ ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများအကြား အရပ်သားအခြေပြု အကြမ်းမဖက်ကာကွယ်ရေးအတွက် လူသားအရင်းအနှီးသည် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးထက် သုံးဆပိုမိုကြီးမားကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ ပုံ4ကိုကြည့်ပါ။
ဒီတော့ ဒီတွေ့ရှိချက်တွေက ရုရှားတပ်တွေ ယူကရိန်းကို စစ်ရေးအရ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်မှု အခြေအနေမှာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ။
• ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများ အိမ်ပြန်ကြပြီး စစ်ရေးအရ ရန်လိုမှုတွင် မည်သည့်အရာမှ မလုပ်လိုကြောင်း ပူတင်၏ ယုံကြည်ချက်သည် ယူကရိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းအများအပြားကို လုံးလုံးလျားလျား ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့် ဖြစ်ရပ်တွင် ၎င်း၏ အကြီးမားဆုံးနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ငွေကုန်ကြေးကျအများဆုံး မှားယွင်းသော တွက်ချက်မှု ဖြစ်နိုင်သည်။
• ယူကရိန်းလူမျိုးများသည် ဒေသခံလူထုအတွက် ထပ်တူထပ်မျှ ပျက်စီးစေသော ကျူးကျော်သူများကို လက်နက်ကိုင်ပြောက်ကျားလှုပ်ရှားမှုဖြင့် စစ်ဆင်နေသည့် အာဖဂန်နစ္စတန်စိတ်ကူးကို ဆုပ်ကိုင်ထားရန် မလိုအပ်ပါ။ ယင်းအစား အရပ်သားများ၏ လက်နက်မဲ့ ကာကွယ်ရေးနှင့် ခုခံမှုသည် လူဦးရေကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်နိုင်ပြီး အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခ၏ လူသားကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်သာမက စစ်ရေးအရ အင်အားကြီးမားသော ပြိုင်ဘက်ကို အောင်ပွဲရရှိရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်လည်း ရှုမြင်ကြသည်။
• အောင်မြင်သော သိမ်းပိုက်မှုဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲများသည် အမြဲတမ်း တနိုင်ငံလုံး၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဖြစ်သည်။ လက်နက်မဲ့ တော်လှန်ရေးသည် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးထက် ကွဲပြားသော ဖီဆန်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိသော လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ရန် လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုလုံးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု အလားအလာ ပိုများသည်။
• ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများသည် ၎င်းတို့၏ကာကွယ်ရေးအစီအမံတွင် ယူကရိန်းမူဝါဒချမှတ်သူများရော အနောက်တိုင်းကျောထောက်နောက်ခံများပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိသော ခုခံမှုအမျိုးအစားအတွက် အံ့အားသင့်ဖွယ်အဆင့်ကို ပြသသည်- ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော စစ်ရေးကျူးကျော်သူအား အစုလိုက်အပြုံလိုက် အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုလုပ်ရပ်များ ပြသသည်။ အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုအတွက် ဤလူ့အလားအလာသည် ယူကရိန်းနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဗျူဟာတွင် ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့် အသုံးမ၀င်သေးပါ။
• ယူကရိန်းလူမျိုးများသည် ၎င်း၏ အခြေတည်သော ဒီမိုကရေစီ၏ ရှင်သန်မှု အပါအဝင် ယူကရိန်း၏ အနာဂတ်ကို စစ်အင်အားပိုကြီးသော ရန်သူကို ဆန့်ကျင်သည့်နည်းဖြင့် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံကို မည်သို့ကာကွယ်မည်နည်း။ နှစ်ရှည်လများ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အားသန်သူများကို အခွင့်ထူးပေးလေ့ရှိသည်။ ယူကရိန်း၏ အသက်ဝင်နေသော လူဦးရေသည် လက်နက်မှလွဲ၍ နိုင်ငံခြားရန်စမှုများကို ထိရောက်စွာ တွန်းလှန်နိုင်ရုံသာမက ပြည်တွင်း အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ရုရှားနှင့် နီးကပ်သော မဟာမိတ်ဖြစ်နိုင်သည့် ပြည်တွင်းစစ်အာဏာရှင်စနစ် ပေါ်ပေါက်လာမှုကို တားဆီးရန်လည်း တွန်းလှန်နိုင်သည်။
2015 လစ်သူယေးနီးယားအရပ်သားအခြေပြု ကာကွယ်ရေးလက်စွဲ၊ နှစ်မျိုးလုံး ရနိုင်ပါသည်။ အဂၤလိပ္ နှင့် အာနီယံ.
• အရပ်ဘက်အခြေခံကာကွယ်ရေးသည် သာမာန်သမိုင်းဝင်အလေ့အကျင့်တစ်ခုမဟုတ်သလို ခေတ်ပြိုင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဗျူဟာများအတွက် ဂြိုလ်သားအယူအဆလည်းမဟုတ်ပါ။ အဲဒီလို ခုခံခဲ့တာ အမျိုးမျိုးသောလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲများ၏နောက်ကွယ်မှတွန်းအားတစ်ခု အပါအဝင်- အမေရိကန် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေး ဗြိတိသျှတို့၊ Austrian Habsburg ဘုရင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သည့် ဟန်ဂေရီလူမျိုးများ၏ စည်းရုံးခြင်း၊ 19 ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် Tsarist Russia အပါအဝင် အင်ပါယာခွဲထွက်ခြင်းကို ပိုလန်ပြည်တွင်းစစ် ဆန့်ကျင်ရေး၊ အီဂျစ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဂါနာ၊ အက်စ်တိုးနီးယား၊ အခြားနိုင်ငံများတွင် လွတ်လပ်ရေးလိုလားသော လှုပ်ရှားမှုများ။ ယခုအချိန်တွင် ဘောလ်တစ်ပြည်နယ်များတွင် ဘက်စုံအကြမ်းမဖက်သော အရပ်သားအခြေခံကာကွယ်ရေးကို ပေါင်းစပ်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ဤသည်ကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ အကြမ်းမဖက်သော ကာကွယ်ရေးဗျူဟာများအတွက် သီးခြားအကြံပြုချက်များ လေးစားဖွယ် အမေရိကန်အခြေစိုက် လုံခြုံရေး အကြံပေးအဖွဲ့မှ တင်ပြသည်။ ထို့အပြင် လစ်သူယေးနီးယားသည် 2016 ခုနှစ်တွင် အစိုးရက "ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဟန့်တားခြင်း [နိုင်ငံသားများအတွက်] လက်နက်မဲ့ အရပ်ဘက် ခုခံမှုအတွက် ပြင်ဆင်မှု လိုအပ်သော၊ ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒနှင့် သတင်းအချက်အလက် တိုက်ခိုက်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရေးနှင့် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒနှင့် သတင်းအချက်အလက် တိုက်ခိုက်မှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေရေး အတွက် XNUMX ခုနှစ်တွင် ချမှတ်ခဲ့သော အဆိုပါ အကောင်အထည်ဖော်မှု ကြိုးပမ်းမှုတွင် ရှေ့တန်းမှ ဖြစ်သည်။ တတိုင်းပြည်လုံး လုံးလုံးလျားလျား ခုခံနိုင်မှု စွမ်းရည်အဖြစ်။” လစ်သူယေးနီးယား ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ချက် နှစ်ခု ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလမ်းညွှန်များ ၎င်း၏နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတွင် "အရပ်ဘက်ခုခံမှုနည်းလမ်းများနှင့် အခြေခံမူများ"
1 စစ်တမ်းရလဒ်များကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပထမဆုံးဖော်ပြပြီး ပေါင်းစပ်ရေးသားထားသော ဆောင်းပါး “သတ်ရန် သို့မဟုတ် မသတ်ရန်- ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများသည် အကြမ်းမဖက်သော အရပ်ဘက်တော်လှန်ရေးအတွက် ရွေးချယ်ကြသည်။Political Violence @ Glance တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဒေါက်တာ Maciej Bartkowski ICNC ၏အကြီးတန်းအကြံပေးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် အရပ်ဘက်ခုခံမှုဆိုင်ရာ သင်ကြားမှု၊ သုတေသနနှင့် လေ့လာမှုတို့ကို ပံ့ပိုးရန် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်များတွင် အလုပ်လုပ်သည်။ သူသည် ICNC Monographs နှင့် ICNC အထူးအစီရင်ခံစာများ ၏ စီးရီးတည်းဖြတ်သူဖြစ်ပြီး အကြမ်းမဖက်သောသမိုင်းကို ပြန်လည်ရယူခြင်း စာအုပ်တည်းဖြတ်သူဖြစ်သည်။ မင်းသူ့ကို @macbartkow လိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ယူကရိန်းသည် ကျူးကျော်မှုကို ကာကွယ်ရန် ရုရှား၏ စစ်ရေးအင်အားနှင့် လိုက်ဖက်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ဂျော့ခ်ျ Lakey အားဖြင့်
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - အကြမ်းမဖက်မှု ဆင်နွှဲခြင်း။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၂၂)
သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်၊ သိမ်းပိုက်ခံလူများသည် ၎င်းတို့၏ ကျူးကျော်သူများကို ဟန့်တားရန် အကြမ်းမဖက်သော တော်လှန်မှု၏ စွမ်းအားကို အသုံးချခဲ့ကြသည်။
အိမ်နီးချင်း ယူကရိန်းရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ကျူးကျော်မှုကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ရဲရင့်တဲ့ ရုရှားနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင် ကမ္ဘာတဝှမ်းက အများအပြားလိုပဲ၊ ယူကရိန်းရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီအတွက် ဆန္ဒရှိဖို့ လုံလောက်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ မလုံလောက်တာကို ကျွန်တော် သတိပြုမိပါတယ်။ ဘိုင်ဒင်၊ နေတိုးနိုင်ငံများနှင့် အခြားနိုင်ငံများသည် စီးပွားရေးအာဏာကို ချုပ်ကိုင်ထားသော်လည်း လုံလောက်ပုံမပေါ်ပေ။
စစ်သားတွေ စေလွှတ်တာက ပိုဆိုးစေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လုံးဝစဉ်းစားလို့မရတဲ့ ပါဝါကို ကိုင်ဆောင်ထားဖို့ မသုံးရသေးတဲ့ အရင်းအမြစ်တစ်ခု ရှိနေရင်ကော။ သယံဇာတအခြေအနေက ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ- စမ်းချောင်းကို ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ မှီခိုအားထားရတဲ့ ရွာတစ်ရွာရှိပြီး ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ခြောက်သွေ့လာပါတယ်။ လက်ရှိဘဏ္ဍာရေး အရင်းအမြစ်အရ ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ရန် ရွာသည် မြစ်နှင့် ဝေးလွန်းသဖြင့် ရွာ၏အဆုံးသတ်ကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။ မည်သူမျှ သတိမထားမိခဲ့သည့်အရာမှာ သုသာန်နောက်ဘက်ရှိ လျှိုငယ်တစ်ခုအတွင်း စိမ့်တွင်းတူးကိရိယာများနှင့်အတူ—ပေါများသောရေအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာပြီး ရွာကိုကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပထမတစ်ချက်မှာ ဆိုဗီယက်ယူနီယံသည် ၎င်း၏စိုးမိုးမှုကို ပြန်လည်အတည်ပြုရန် ပြောင်းရွှေ့လာသောအခါ၊ ချက်စလိုဗက်ကီးယား၏ အခြေအနေမှာ ၁၉၆၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်၊ နိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင် Alexander Dubcek သည် ဒဏ်ရာရသူများသာ သေဆုံးနိုင်သည့် အချည်းနှီးသော တိုက်ပွဲများကို တားဆီးရန် ၎င်း၏စစ်သားများကို ၎င်းတို့၏ စစ်တန်းလျားများတွင် သော့ခတ်ထားသည်။ ဝါဆော ပဋိညာဉ်၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သူ့နိုင်ငံသို့ ချီတက်လာစဉ်တွင် ၎င်းသည် ကုလသမဂ္ဂရှိ ၎င်း၏ သံတမန်များအား အမှုကိစ္စပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားချက်များ ရေးသားခဲ့ပြီး မော်စကိုတွင် စောင့်ကြိုနေသော ကံကြမ္မာကို ဖမ်းရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် ညသန်းခေါင်အချိန်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
သို့သော် Dubcek သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြား သတင်းထောက်များ သို့မဟုတ် ကျူးကျော်သူများ သတိမပြုမိဘဲ သုသာန်နောက်ကွယ်ရှိ လျှိုမြောင်တွင် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ညီမျှသည်။ ၎င်းကို ထိထိရောက်ရောက် နှိပ်ကွပ်လိုက်သည်မှာ ယခင်လများအတွင်း တက်ကြွသော သဘောထားကွဲလွဲသူများ၏ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှ “လူ့မျက်နှာဖြင့် ဆိုရှယ်လစ်စနစ်” ကို ဖန်တီးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ချက်နိုင်ငံနှင့် စလိုဗက်လူမျိုး အများအပြားသည် မကျူးကျော်မီတွင် လှုပ်ရှားနေကြပြီး အမြင်သစ်တစ်ခုကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာ တီထွင်လိုက်ခြင်းဖြင့် အတူတကွ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ကျူးကျော်မှုစတင်သောအခါတွင် သူတို့၏အရှိန်အဟုန်သည် ၎င်းတို့အား ကောင်းမွန်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် ပြောင်မြောက်စွာ ပြောင်မြောက်စွာ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သြဂုတ် ၂၁ ရက်၊ ပရာ့ဂ်၌ ခေတ္တရပ်နားထားရာ လူထောင်ပေါင်းများစွာက စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရူဇီနိုလေဆိပ်မှ တာဝန်ရှိသူများက ဆိုဗီယက်လေယာဉ်များကို လောင်စာဆီ ထောက်ပံ့ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ နေရာအတော်များများတွင် လူအုပ်ကြီးသည် ဝင်လာမည့် ကန်များလမ်းကြောင်းတွင် ထိုင်နေကြ၏။ ရွာတစ်ရွာတွင် နိုင်ငံသားများသည် Upa မြစ်ကူးတံတားကို ကိုးနာရီကြာ ဖြတ်ကာ လူသားကွင်းဆက်တစ်ခု ဖွဲ့ကာ ရုရှားတင့်ကားများကို နောက်ဆုံးတွင် အမြီးပြောင်းစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
ကာကွယ်ရေးအတွက် အကြမ်းမဖက်သော ပါဝါကို အသုံးချနိုင်သည့် အလားအလာကို သိချင်ကြသော အခြားနိုင်ငံမှ လေ့လာသူအများအပြားအတွက် သြဂုတ်လ 1968 သည် မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
Swastika များကို ကန်များပေါ်တွင် ခြယ်သထားသည်။ ရုရှ၊ ဂျာမန်နှင့် ပိုလန်ဘာသာစကားဖြင့် စာရွက်စာတန်းများကို ကျူးကျော်သူများကို မှားယွင်းနေကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပြီး မရေမတွက်နိုင်အောင် ရှုပ်ထွေးနေသော ခံစစ်စစ်သားများနှင့် ဒေါသထွက်နေသော ချက်လူငယ်များကြားတွင် မရေမတွက်နိုင်သော ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တပ်မ တော် များ သည် လမ်း ညွှန် လွဲ မှား စွာ ပေး ဆောင် ခဲ့ ပြီး လမ်း ညွှန် များ နှင့် ရွာ ဆိုင်း ဘုတ် များ ကို လည်း ပြောင်း လဲ ခဲ့ ပြီး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု နှင့် စားနပ်ရိက္ခာ များ ကို ငြင်းဆို ခဲ့ သည် ။ လျှို့ဝှက်ရေဒီယိုဌာနများသည် လူထုအား အကြံဉာဏ်နှင့် ခုခံမှုသတင်းများကို ထုတ်လွှင့်သည်။
ကျူးကျော်မှု၏ ဒုတိယနေ့တွင် ပရာ့ဂ်ရှိ Wenceslas ရင်ပြင်တွင် လူ 20,000 က ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် တစ်နာရီကြာ အလုပ်ရပ်နားမှုတစ်ခုက ရင်ပြင်ကို အံ့အားသင့်စွာ ငြိမ်ကျသွားခဲ့သည်။ လေးရက်မြောက်နေ့တွင် ကျောင်းသားများနှင့် အလုပ်သမားများသည် ဆိုဗီယက်၏ ညမထွက်ရအမိန့်ကို စိန့်ဝန့်စလပ်စ်ရုပ်တု၌ နာရီလက်တံဖြင့် နာရီလက်လက်ထိုင်ကာ ဖီဆန်ခဲ့ကြသည်။ ပရာ့ဂ်မြို့၏ လမ်းများပေါ်တွင် လူ ၁၀ ဦးတွင် ကိုးဦးသည် ၎င်းတို့၏ရင်ခွင်များတွင် ချက်နိုင်ငံအလံများ ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ရုရှားတွေ တစ်ခုခုကြေငြာဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါတိုင်း လူတွေက ရုရှားတွေ မကြားနိုင်တဲ့ ဒင်နာတွေ တက်လာကြတယ်။
ခုခံမှု၏ စွမ်းအင်များစွာကို သုံးစွဲခြင်းသည် ဆန္ဒကို အားနည်းစေပြီး ကျူးကျော်တပ်များ၏ ရှုပ်ထွေးမှုကို တိုးစေသည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ဆိုဗီယက်စစ်အာဏာပိုင်များသည် ချက်လူမျိုးတို့အား တန်ပြန်ငြင်းခုံမှုများဖြင့် ၎င်းတို့၏တပ်များထံ လက်ကမ်းစာစောင်များ ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် ရုရှားတပ်များ အစားထိုးရန် မြို့များအတွင်းသို့ ယူနစ်သစ်များ ရောက်ရှိလာပြီး အလှည့်ကျ စတင်ခဲ့သည်။ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် အဆက်မပြတ် ထိပ်တိုက်တွေ့သော်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်မရှိဘဲ လျင်မြန်စွာ အရည်ပျော်သွားခဲ့သည်။
ကရင်မလင်အတွက်ရော ချက်နှင့်စလိုဗက်များအတွက် လောင်းကြေးများ မြင့်မားခဲ့သည်။ အစိုးရကို အစားထိုးရန် ၎င်း၏ ရည်မှန်းချက်ကို အောင်မြင်စေရန် ဆိုဗီယက်ယူနီယံသည် စလိုဗက်ကီးယားကို ဆိုဗီယက်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဘိုဟီးမီးယားနှင့် မိုရာဗီယာတို့ကို ဆိုဗီယက်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း သိရသည်။ သို့သော် ဆိုဗီယက်တို့ လျစ်လျူရှုထားသောအရာမှာ ယင်းထိန်းချုပ်မှုသည် ပြည်သူများ၏ ချုပ်ကိုင်လိုသောဆန္ဒအပေါ် မူတည်နေခြင်းဖြစ်သည်၊ ထိုဆန္ဒကို မမြင်နိုင်ခဲပေ။
ကရင်မလင်ကို အပေးအယူလုပ်ခိုင်းတယ်။ Dubcek ကို ဖမ်းဆီးပြီး ၎င်းတို့၏ အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်မည့်အစား ကရင်မလင်သည် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှုကို လက်ခံခဲ့သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးက အပေးအယူလုပ်ကြတယ်။
၎င်းတို့ဘက်မှ၊ ချက်နှင့် စလိုဗက်လူမျိုးများသည် ထက်မြက်သော အကြမ်းမဖက်သော ကြံ့ကြံ့ခံသူများဖြစ်ကြသော်လည်း ဗျူဟာမြောက် အစီအစဉ်မရှိ— ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသော လက်နက်များအပြင် အခြားသော အကြမ်းမဖက်သော နည်းဗျူဟာများကိုပါ အသုံးချနိုင်သည့် အစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့တိုင်၊ ဆိုဗီယက်တို့၏ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုထက် ၎င်းတို့၏ အရေးကြီးဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်သော ချက်အစိုးရကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ၎င်းတို့ယုံကြည်သည့်အရာကို အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အခြေအနေတွေအရ ထူးထူးခြားခြား အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ အခိုက်အတန့်ပါပဲ။
ကာကွယ်ရေးအတွက် အကြမ်းမဖက်သော ပါဝါကို အသုံးချနိုင်သည့် အလားအလာကို သိချင်ကြသော အခြားနိုင်ငံမှ လေ့လာသူအများအပြားအတွက် သြဂုတ်လ 1968 သည် မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယား၊ လက်တွေ့ဘဝဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုများသည် အကြမ်းမဖက်သောရုန်းကန်မှု၏ လျစ်လျူရှုထားလေ့ရှိသော စွမ်းအားအကြောင်း ဆန်းသစ်သောတွေးခေါ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပေ။
ဒိန်းမတ်နှင့် ကျော်ကြားသော စစ်ရေးဗျူဟာဖြစ်သည်။
အသက်ရှင်သန်နိုင်သည့် သောက်သုံးရေကို ဆက်လက်ရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့ပင်၊ ဒီမိုကရေစီကို ခုခံကာကွယ်နိုင်သော အကြမ်းမဖက်သောစွမ်းအားကို ရှာဖွေခြင်းသည် နည်းပညာရှင်များကို ဆွဲဆောင်သည်- နည်းပညာကို တွေးတောလိုသူများ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ၁၉၆၄ ခုနှစ် Oxford တက္ကသိုလ်တွင် အရပ်ဘက်အခြေခံကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ညီလာခံ၌ ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သော နာမည်ကျော်ဗြိတိသျှစစ်တပ်ဗျူဟာမှူး BH Liddell Hart ဖြစ်သည်။ (ကျွန်တော် သူ့ကို "Sir Basil" လို့ ခေါ်ခိုင်းတယ်။)
Liddell Hart သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး မကြာမီတွင် ဒိန်းမတ်အစိုးရမှ စစ်ဘက်ကာကွယ်ရေးဗျူဟာအတွက် ၎င်းတို့နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် ဖိတ်ကြားခံရကြောင်း Liddell Hart က ပြောကြားခဲ့သည်။ သူဒီလိုလုပ်ခဲ့ပြီး လေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့ လူထုကတပ်ထားတဲ့ အကြမ်းမဖက်တဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့ သူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကို အစားထိုးဖို့ အကြံပေးခဲ့တယ်။
Danes သည် ဂျာမန်များအတွက် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကို ဟန့်တားရန် နည်းလမ်းပေါင်း တစ်ထောင်ကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ ဤကျယ်ပြန့်ပြီး ခွန်အားဖြစ်စေသော တီထွင်ဖန်တီးမှုသည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အစားထိုးရွေးချယ်မှုနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း တံခါးနားနာဇီဂျာမနီမှ စစ်ရေးအရ သိမ်းပိုက်ခံရချိန်တွင် ဒိန်းမတ်တို့ အမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရာများကို သူ၏အကြံဉာဏ်က ကျွန်ုပ်အား ပိုမိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုရန် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ ဒိန်းမတ်အစိုးရသည် အကြမ်းဖက်ခုခံခြင်းသည် အချည်းနှီးဖြစ်ပြီး ဒိန်းမတ်သေဆုံးပြီး စိတ်ပျက်အားငယ်စေမည့်သာဖြစ်ကြောင်း ဒိန်းမတ်အစိုးရက သိထားသည်။ ယင်းအစား ခံနိုင်ရည်စွမ်းအားသည် မြေပြင်နှင့် မြေအောက် နှစ်ခုစလုံးတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဒိန်းမတ်ဘုရင်သည် နာဇီအစိုးရမှ ဂျူးများကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု အရှိန်မြှင့်လာသောအခါတွင် နာဇီအစိုးရမှ ဂျူးလူမျိုးများအပေါ် ဖိနှိပ်မှုအရှိန်မြှင့်လာသောအခါတွင် ဒိန်းမတ်ဘုရင်သည် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာစေရန်အတွက် ကိုပင်ဟေဂင်မြို့၏လမ်းများပေါ်တွင် မြင်းကိုစီးကာ ပုံဆောင်လုပ်ရပ်များဖြင့် ခုခံခဲ့သည်။ ယနေ့တိုင် လူအတော်များများ သိနေကြဆဲဖြစ်သည်။ အလွန်အောင်မြင်သော ဂျူးလူမျိုးများလွတ်မြောက်ရေး ဒိန်းမတ်မြေအောက်မှ ဆွီဒင်ကို ကြားနေစေရန်။
သိမ်းပိုက်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံအဖြစ် ဒိန်းမတ်လူမျိုးများသည် ၎င်း၏စီးပွားရေးကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက် ဟစ်တလာအတွက် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသည် တန်ဖိုးရှိကြောင်း ပိုမိုသိရှိလာကြသည်။ အထူးသဖြင့် ဟစ်တလာက အင်္ဂလန်ကို ကျူးကျော်ဖို့ သူ့အတွက် စစ်သင်္ဘောတွေဆောက်ဖို့ ဒိန်းမတ်လူမျိုးတွေကို အားကိုးခဲ့တယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သင့်အပေါ်၌ တစ်စုံတစ်ယောက်အား မှီခိုနေသောအခါတွင် ၎င်းသည် သင့်အား စွမ်းအားပေးသည်ဟု Danes မှ နားလည်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် ဒိန်းမတ်အလုပ်သမားတွေဟာ သူတို့ခေတ်ရဲ့ အပြောင်မြောက်ဆုံး သင်္ဘောတည်ဆောက်သူတွေအဖြစ်ကနေ မိုက်မဲပြီး အမြတ်အစွန်းမရှိဆုံးသူတွေဆီ ရောက်သွားကြပါတယ်။ ကိရိယာများသည် ဆိပ်ကမ်းထဲသို့ "မတော်တဆ" ပြုတ်ကျခဲ့ပြီး သင်္ဘောများကိုင်ဆောင်ထားသော သင်္ဘောများတွင် "မိမိဘာသာ" ပေါက်ကြားမှု စသည်တို့ဖြစ်သည်။ စိတ်ပျက်အားငယ်နေသော ဂျာမန်များသည် တစ်ခါတစ်ရံ ဒိန်းမတ်မှ ဟမ်းဘတ်သို့ မပြီးဆုံးသေးသော သင်္ဘောများကို ဆွဲတင်ရန် တွန်းပို့ခံရသည်။
ခုခံမှု တိုးလာသည်နှင့်အမျှ စက်ရုံများမှ အလုပ်သမားများ စောစီးစွာ ထွက်ခွာသွားသည့် အလုပ်သမားများနှင့်အတူ သပိတ်မှောက်မှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားလာသည်နှင့် အမျှ “မီးလင်းနေသေးချိန်မှာ ကျွန်တော့် ခြံကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ ပြန်လာရမှာပေါ့၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ မိသားစုက ဟင်းသီး ဟင်းရွက်မရှိရင် ငတ်မယ်”၊
Danes သည် ဂျာမန်များအတွက် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကို ဟန့်တားရန် နည်းလမ်းပေါင်း တစ်ထောင်ကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ ကျယ်ပြန့်ပြီး စွမ်းအားပြည့် တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းသည် လူဦးရေ၏ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ရာကသာ လုပ်ဆောင်သည့် - အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုကို တွန်းလှန်ခြင်း၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အစားထိုးရွေးချယ်မှုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး လူများစွာကို ဒဏ်ရာရစေပြီး သေဆုံးစေမည့်၊ အားလုံးနီးပါးကို ပြတ်ပြတ်သားသား လျှို့ဝှက်ထားစေမည်ဖြစ်သည်။
လေ့ကျင့်ရေး အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါ၀င်သည်။
ထက်မြက်သော ကြံဖန်ဖန်တီးထားသော ကျူးကျော်ကျူးကျော်မှုကို အကြမ်းမဖက်ခုခံမှု၏ အခြားသမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များကို ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ နော်ဝေလူမျိုးများသည် ဒိန်းမတ်တို့ထက် သာလွန်နေစေရန်မဟုတ်ဘဲ နာဇီတို့ သိမ်းပိုက်မှုအောက်တွင် ၎င်းတို့၏အချိန်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ နာဇီများ သိမ်းပိုက်မှုကို အကြမ်းမဖက် တားဆီးပါ။ သူတို့ရဲ့ကျောင်းစနစ်။ နော်ဝေနာဇီလူမျိုး ၁၀ ဦးလျှင် ဂျာမန်သိမ်းပိုက်ရေးတပ်မှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့် Vidkun Quisling သည် နိုင်ငံကို တာဝန်ခံသည့် နော်ဝေနာဇီအဖွဲ့မှ သီးခြားအမိန့်ပေးခဲ့သော်လည်း ယင်းမှာ နော်ဝေနိုင်ငံသား ၁၀ ဦးလျှင် စစ်သားတစ်ဦးဖြစ်သည်။
အောက်စဖို့ဒ် ကွန်ဖရင့်မှာ ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ နောက်ထပ်ပါဝင်သူ Wolfgang Sternstein က Ruhrkampf နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူ့ရဲ့ ဒီပလိုမာစာတမ်းကို ရေးခဲ့ပါတယ်၊ 1923 ဂျာမန်အလုပ်သမားများ၏ အကြမ်းမဖက်တော်လှန်ရေး ပြင်သစ်နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံတပ်များက ဂျာမန်တို့၏ လျော်ကြေးငွေအတွက် သံမဏိထုတ်လုပ်မှုကို သိမ်းယူရန် ကြိုးစားနေသော Ruhr တောင်ကြားရှိ ကျောက်မီးသွေးနှင့် သံမဏိထုတ်လုပ်ရေးဗဟိုဌာနကို ကျူးကျော်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ Wolfgang က ၎င်းသည် ထိုအချိန်က ဒီမိုကရက်တစ် ဂျာမန်အစိုးရ၊ Weimar Republic မှ တောင်းဆိုခဲ့သော အလွန်ထိရောက်သော တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်အား ပြောကြားခဲ့သည်။ Ruhr ချိုင့်ဝှမ်းတစ်ခုလုံး သပိတ်မှောက်သွားသောကြောင့် ပြင်သစ်နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံအစိုးရများက ၎င်းတို့၏တပ်များကို ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းမှာ အမှန်တကယ်ထိရောက်မှုရှိသည်။ “သူတို့ကို လှံစွပ်တွေနဲ့ ကျောက်မီးသွေးတူးခွင့်ပေးပါ” ဟု အလုပ်သမားများက ပြောသည်။
ဒီလိုနဲ့ တခြားအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာတာက အကြမ်းမဖက်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာ လေ့ကျင့်မှုရဲ့အကျိုးမရှိဘဲ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြတာပါ။ ဘယ်တပ်မှူးက တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အရင်လေ့ကျင့်မပေးဘဲ တိုက်ခိုက်ဖို့ အမိန့်ပေးမှာလဲ။
US ရှိ မြောက်ပိုင်းကျောင်းသားများအတွက် ကွာခြားချက်ကို ကိုယ်တွေ့မြင်ခဲ့ရပါသည်။ မစ္စစ္စပီသို့ တောင်ပိုင်းသို့သွားရန် လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ ခွဲခြားရေးသမားများလက်တွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်းတို့ကို စွန့်စားပါ။ 1964 Freedom Summer သည် လေ့ကျင့်ရန် မရှိမဖြစ်ဟု ယူဆခဲ့သည်။
ဒါကြောင့် နည်းပညာကို ဦးတည်တဲ့ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တွေးခေါ်မှုနည်းဗျူဟာနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ လေ့ကျင့်မှုလိုအပ်တဲ့ ကာကွယ်ရေးအတွက် ထိရောက်တဲ့ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကို စဉ်းစားမိပါတယ်။ တပ်မတော်သားတွေကလည်း သဘောတူတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကို ရှုပ်ထွေးစေသည့်အရာမှာ အကျိုးမရှိဘဲ ဤဥပမာများတွင် အကြမ်းမဖက်သော ကာကွယ်ရေး၏ မြင့်မားသောအဆင့်ထိရောက်မှုဖြစ်သည်။ နည်းဗျူဟာနှင့် လေ့ကျင့်မှုများဖြင့် လုံလုံခြုံခြုံ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားလျှင် ၎င်းတို့ ပြီးမြောက်နိုင်သည်ကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
သို့ဆိုလျှင် မည်သည့်ဒီမိုကရေစီအစိုးရသည် စစ်ဘက်-စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အလေးအနက်မထားဘဲ အရပ်ဘက်အခြေခံကာကွယ်ရေးဖြစ်နိုင်ချေများကို အလေးအနက်စူးစမ်းလိုသည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
ဂျော့ခ်ျ Lakey တိုက်ရိုက်လှုပ်ရှားမှု လှုပ်ရှားမှုများတွင် ဆယ်စုနှစ်ခြောက်ခုကျော် လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက Swarthmore ကောလိပ်မှ အနားယူခဲ့ပြီး၊ အရပ်သားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ပထမဆုံးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး မကြာသေးမီက ရာသီဥတုတရားမျှတရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် တိုက်ကြီးငါးခုတွင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပေါင်း ၁,၅၀၀ ကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်များတွင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ပရောဂျက်များကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ စာအုပ် ၁၀ အုပ်နှင့် ဆောင်းပါးများစွာသည် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် လူမှုအဆင့်အတန်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုအဖြစ် သူ၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာ သုတေသနပြုချက်များကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်။ သူ၏နောက်ဆုံးထွက်စာအုပ်များမှာ "Viking Economics- Scandinavians များ မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း တတ်နိုင်သလောက်" (1,500) နှင့် "How We Win: A Guide to Nonviolent Direct Action Campaigning" (10)။
ယူကရိန်း၏ လျှို့ဝှက်လက်နက်သည် အရပ်ဘက် ခုခံမှု ဖြစ်နိုင်သည်။
Daniel Hunter မှ
လက်နက်မဲ့ ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများသည် လမ်းဆိုင်းဘုတ်များ ပြောင်းလဲခြင်း၊ တင့်ကားများကို ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် ရုရှားစစ်တပ်ကို ထိပ်တိုက်တွေ့ခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ဗျူဟာမြောက် ထက်မြက်မှုကို ပြသနေသည်။
ခန့်မှန်းနိုင်သည်မှာ၊ အနောက်နိုင်ငံများ၏ စာနယ်ဇင်းအများစုသည် ရုရှား၏ကျူးကျော်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ယူကရိန်းသံတမန် သို့မဟုတ် စစ်ရေးအရ ခုခံမှုအပေါ် အာရုံစိုက်ထားပြီး ကင်းလှည့်ရန်နှင့် ကာကွယ်ရန်အတွက် ပုံမှန်နိုင်ငံသားများကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော၊
အဆိုပါ တပ်ဖွဲ့များသည် ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုအားကောင်းကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ၎င်း၏ အစီအစဉ်များကို သတ္တိရှိရှိ နှောင့်ယှက်လျက်ရှိသည်။ ယူ Yaryna Arieva နှင့် Sviatoslav Fursin တို့သည် လေကြောင်းမှ ၀င်ရောက်စီးနင်းသည့် ဥသြသံများကြားတွင် လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။. လက်ထပ်ကတိကဝတ်ပြုပြီးတာနဲ့ သူတို့နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဒေသတွင်း နယ်မြေကာကွယ်ရေးစင်တာမှာ မှတ်ပုံတင်ဖို့ ဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
စစ်ရေးအရ အင်အားကြီးသော ပြိုင်ဘက်ကို အောင်မြင်စွာ ခုခံနိုင်မှုသည် လက်နက်မဲ့ သူများထံမှ မကြာခဏ အာရုံစိုက်မှု နည်းပါးသည့် အခန်းကဏ္ဍ အပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သော ခုခံမှု အများအပြား လိုအပ်ကြောင်း သမိုင်းက ဖော်ပြသည်။
ပူတင်၏ ယူကရိန်းကို လျင်မြန်စွာ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာမှုမှာ တုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာများစွာကျန်ခဲ့သော်ငြားလည်း ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများသည် လက်နက်မဲ့ပြည်သူများကို ခုခံရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ပြသလျက်ရှိသည်။
ယခုအချိန်တွင် ရုရှားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြခန်းစာအုပ်သည် ယူကရိန်းရှိ စစ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဖျက်ဆီးရန် အဓိကအာရုံစိုက်နေပုံရသည်။ နိုင်ငံ၏စစ်တပ်နှင့် လက်နက်ကိုင်အသစ် အရပ်သားများသည် ၎င်းတို့ကဲ့သို့ သူရဲကောင်းပီသသည့်အရာများကို ရုရှားအတွက် လူသိများသည်။ အနောက်နိုင်ငံများ၏ စာနယ်ဇင်းများသည် လက်နက်မဲ့ အရပ်သားများ၏ ခုခံမှုကို လျစ်လျူရှုထားသကဲ့သို့ ရုရှားစစ်တပ်ကလည်း ယင်းကိစ္စအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘဲ သဲသဲကွဲကွဲ ဖြစ်နေပုံရသည်။
လူတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်ရဲ့ တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အရှိန်တက်လာနေတဲ့ ခုခံမှုရဲ့ ဒီလက်နက်မဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါပဲ။ ယူကရိန်းလမ်းများအေဂျင်စီ Ukravtodor မှ "လမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ နယ်မြေအသိုက်အဝန်းများ၊ ဒေသန္တရအစိုးရများအားလုံးကို အနီးနားရှိ လမ်းဆိုင်းဘုတ်များကို ချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။" “Fuck you” “Again fuck you” နှင့် “To Russia fuck you” ဟု အမည်ပြောင်းထားသော photoshopped အဝေးပြေးလမ်းမကြီး ဆိုင်းဘုတ်ဖြင့် ယင်းကို အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ အရင်းအမြစ်များက ကျွန်ုပ်အား ဤအရာများ၏ ဗားရှင်းများသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် ဖြစ်ပျက်နေပါသည်။ (ဟိ New York Times ကို ရှိပါတယ် ဆိုင်းဘုတ် အပြောင်းအလဲများကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာ။ )
ထိုအေဂျင်စီက လူများကို “ရနိုင်သောနည်းလမ်းအားလုံးဖြင့် ရန်သူကိုပိတ်ဆို့ရန်” အားပေးခဲ့သည်။ လူတွေက ကရိန်းတွေသုံးပြီး ဘိလပ်မြေတုံးတွေကို လမ်းနဲ့ရွှေ့ဖို့၊ ပုံမှန်ပြည်သူများသည် လမ်းများကိုပိတ်ဆို့ရန် သဲအိတ်များ တပ်ဆင်ကြသည်။.
ယူကရိန်းသတင်းထုတ် HB လမ်းမများပေါ်တွင် အငွေ့ပျံနေသည့် စစ်ယာဉ်တန်းဖြင့် သွားလာရန် ၎င်း၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးပြုနေသည့် လူငယ်တစ်ဦးကို ပြသခဲ့သည်။ Tiananmen Square ၏ "Tank Man" ကို အမှတ်ရရင်း ထိုအမျိုးသားသည် အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ထရပ်ကားများရှေ့မှ ဖြတ်သွားကာ လမ်းဘေးသို့ ကွေ့ပတ်သွားစေရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ လက်နက်မဲ့၊ အကာအကွယ်မဲ့၊ သူ့လုပ်ရပ်က ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ အန္တရာယ်ရဲ့သင်္ကေတပါ။
ဒါကို Bakhmach မှာရှိတဲ့ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကလည်း ထပ်တူထပ်မျှ ပဲ့တင်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရွေ့လျားနေသော ကန်များရှေ့မှာ ထားလိုက်ပါ။ ကြိမ်ဖန်များစွာ တွန်းလှန်လေ၏။ သို့သော်လည်း ထောက်ခံသူအများအပြားသည် ဗီဒီယိုရိုက်နေသော်လည်း ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာ--သတိရှိရှိလုပ်ဆောင်သောအခါ-- ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် လျင်မြန်စွာတည်ဆောက်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ညှိနှိုင်းထားသော ခုခံမှုသည် လှုံ့ဆော်မှုပေးသော အထီးကျန်လုပ်ရပ်များမှ တိုးတက်နေသော စစ်တပ်ကို ချေမှုန်းနိုင်သည့် ပြတ်သားသောလုပ်ရပ်များဆီသို့ ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်။
မကြာသေးမီက ဆိုရှယ်မီဒီယာ အစီရင်ခံစာများသည် ဤစုပေါင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပြသနေသည်။ မျှဝေထားသော ဗီဒီယိုများတွင် လက်နက်မဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းများသည် ရုရှားတင့်ကားများကို အောင်မြင်ကြောင်း ထင်ရှားစွာ ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒီထဲမှာ ပြင်းထန်သော ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များသည် ကန်များဆီသို့ ဖြည်းညှင်းစွာ လျှောက်သွားကာ လက်ဖြင့်ဖွင့်ကာ အများစုမှာ စကားလုံးမပါဘဲ လျှောက်သွားကြသည်။ တင့်ကားမောင်းသူသည် ပစ်ခတ်ရန် ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် စိတ်ပါဝင်စားမှု မရှိပေ။ ဆုတ်ခွာခြင်းကို ရွေးချယ်ကြသည်။ ယူကရိန်းနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ မြို့ငယ်လေးများတွင် ယင်းကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
ဤလူထုလှုပ်ရှားမှုများကို အများအားဖြင့် ရင်းနှီးသောအုပ်စုများ—စိတ်တူသောမိတ်ဆွေများ၏ သေးငယ်သောဆဲလ်များက လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ ဖိနှိပ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေကြောင့် ရင်းနှီးသောအုပ်စုများသည် ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများကို တီထွင်နိုင်သည် (အင်တာနက်/ဆဲလ်ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုကို ပိတ်ပစ်မည်ထင်သည်) နှင့် တင်းကျပ်သောအစီအစဥ်အဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ရေရှည်လုပ်ငန်းခွင်များတွင်၊ ဤဆဲလ်များသည် ကျောင်းများ၊ ဘုရားကျောင်းများ/ဗလီများနှင့် အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။
ဂျော့ခ်ျ Lakey သည် ကျူးကျော်အင်အားဖြင့် ယူကရိန်း၏ လုံး၀ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိသည့်အတွက် အမှုအား ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ချက်ကိုစလိုဗက်ကီးယားကို ကိုးကားပြီး ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှာ လူတွေက ဆိုင်းဘုတ်တွေကို နာမည်ပြောင်းခဲ့တယ်။ သာဓကအားဖြင့် ဆိုဗီယက်တင့်ကားများ ဆုတ်ခွာသွားသည့်တိုင်အောင် ရာနှင့်ချီသောလူများသည် တံတားကြီးတစ်ခုအား နာရီပေါင်းများစွာ ပိတ်ဆို့ထားခဲ့သည်။
ဆောင်ပုဒ်မှာ ဖြစ်နိုင်သမျှ လုံးလုံးလျားလျား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဆီလိုပါသလား။ ရေလိုပါသလား။ နံပါတ်၊ လမ်းညွှန်များ လိုအပ်ပါသလား။ ဒါကတော့ မှားပါတယ်။
သူတို့မှာ သေနတ်တွေရှိလို့ လက်နက်မဲ့ အရပ်သားတွေနဲ့ လိုက်သွားနိုင်တယ်လို့ စစ်တပ်က ယူဆတယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသော လုပ်ရပ်တိုင်းသည် ၎င်းတို့မှားကြောင်း သက်သေပြနေပါသည်။ ခုခံမှုတိုင်းသည် ကျူးကျော်သူ၏ သေးငယ်သောပန်းတိုင်တိုင်းကို ခက်ခဲသောတိုက်ပွဲဖြစ်စေသည်။ တစ်ထောင်ဖြတ်နဲ့သတ်တယ်။
ကျူးကျော်မှုမတိုင်ခင်မှာ သုတေသီ Maciej Mathias Bartkowski ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထုတ်ဝေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိသော ယူကရိန်း၏ ကတိကဝတ်များဆိုင်ရာ ထဲထဲဝင်ဝင် အချက်အလက်များဖြင့် "ယူကရိန်းလူထုရဲ့ သဘောထားက အမိမြေကို လက်နက်နဲ့ ကာကွယ်ဖို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထောက်ခံမယ်လို့ မျှော်လင့်နိုင်တဲ့အခါ ယူကရိန်းတပ်တွေက Euromaidan တော်လှန်ရေးနဲ့ ခရိုင်းမီးယားနဲ့ Donbas ဒေသကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်မှာပဲ Euromaidan တော်လှန်ရေး၊ သူတို့မြို့မှာ ပြည်ပက လက်နက်ကိုင် သိမ်းပိုက်ရင် ဘာလုပ်ကြမလဲလို့ လူတွေက မေးကြတယ်။
အရပ်ဘက် တော်လှန်ရေး (၂၆ ရာခိုင်နှုန်း)၊ လက်နက် ကိုင်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ် သည့် ရာခိုင်နှုန်းထက် (၂၅ ရာခိုင်နှုန်း) ထက် သာရ က ၎င်းတို့သည် အရပ်ဘက် တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင် မည်ဟု ဆိုသည်။ အခြားသူများမှာ (၁၉ ရာခိုင်နှုန်း) မသိသေးသူများ သို့မဟုတ် အခြားဒေသသို့ ထွက်ခွာမည်ဟု ပြောဆိုသူများ ရောနှောနေပါသည်။
အကြမ်းမဖက်သော ခုခံမှုနယ်ပယ်သည် နှစ်ရှည်လများ ခုခံမှုတွင် စစ်သားများ၏ စိတ်ဓာတ် ကျဆင်းသွားပုံ ဥပမာများဖြင့် လေးလံနေပါသည်။ အထူးသဖြင့် အရပ်သားများက စစ်တပ်ကို လူသားများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်သော လူသားများအဖြစ် ရှုမြင်သည့်အခါ၊
ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများသည် ခုခံရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု ရှင်းလင်းထားသည်။ ယူကရိန်းရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ အစဉ်အလာကို ရင်းနှီးတဲ့လူတွေအတွက် အံ့သြစရာတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အများစုသည် မကြာသေးမီက မှတ်ဉာဏ်တွင် ခေတ်ပြိုင်ဥပမာများရှိသည် — အကြောင်း Netflix ၏မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် “Winter on Fire” နှင့်ပတ်သက်သော 2013-2014 Maidan တော်လှန်ရေး ဒါမှမဟုတ် အကျင့်ပျက် အစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့ ၁၇ ရက်ကြာ အကြမ်းမဖက် ခုခံခဲ့တယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာ အကြမ်းမဖက်သော ပဋိပက္ခ၏ ဇာတ်ကား “လိမ္မော်ရောင်တော်လှန်ရေး။ "
Bartkowski ၏အဓိကကောက်ချက်တစ်ခုမှာ- "ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများ အိမ်ပြန်ကြပြီး စစ်ရေးရန်လိုမှုတွင် မည်သည့်အရာကိုမျှ မလုပ်လိုကြောင်း ပူတင်၏ ယုံကြည်ချက်သည် ၎င်း၏ အကြီးမားဆုံးနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ငွေကုန်ကြေးကျအများဆုံး မှားယွင်းသော တွက်ချက်မှု ဖြစ်နိုင်သည်။"
ရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ သန္နိဋ္ဌာန်ကို အားနည်းစေတယ်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လူတွေက "ရုရှားစစ်တပ်" အကြောင်းကို စိတ်တစ်ခုတည်း အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ပြောနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ စစ်တပ်တိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းတွေ၊ စိုးရိမ်မှုတွေ၊ အိပ်မက်တွေနဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ။ ယခုအခိုက်အတန့်တွင် အံ့အားသင့်ဖွယ်တိကျသည့် အမေရိကန်အစိုးရထောက်လှမ်းရေးက ပူတင်သည် ယခုတိုက်ခိုက်မှုပထမအဆင့်တွင် ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်များ မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း အခိုင်အမာပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအချက်က ရုရှားစစ်တပ်၏ စိတ်ဓာတ်ကို ၎င်းတို့မြင်ပြီးဖြစ်သည့် ခုခံမှုကြောင့် အနည်းငယ် ယိမ်းယိုင်သွားနိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အမြန်အနိုင်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် ယူကရိန်းသည် ၎င်း၏လေပိုင်နက်ကို ထိန်းထားနိုင်မှုကို ရှင်းပြသည်။ New York Times ကို အကြောင်းရင်းများစွာကို အကြံပြုထားသည်- ပိုမို ထက်မြက်သော စစ်တပ်၊ မိုဘိုင်းလေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်များ နှင့် ရုရှားထောက်လှမ်းရေး ညံ့ဖျင်းဖွယ်ရှိသည်။အသုံးမပြုသော ပစ်မှတ်ဟောင်းများကို ထိမှန်သည်ဟု ထင်မြင်ပါသည်။
ဒါပေမယ့် ယူကရိန်း လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေ တုန်လှုပ်သွားရင်တော့ ဘာဖြစ်မလဲ။
စိတ်ဓာတ်ရေးရာသည် ရုရှားကျူးကျော်သူများဆီသို့ ပြန်လှည့်သွားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့သည် ပို၍ပင် ခံနိုင်ရည်ရှိသောသူနှင့် တွေ့နိုင်သည် ။
မှလှုံ့ဆော်မှုယူပါ ရုရှားစစ်တပ်ကို နှိမ့်ချသော ဤအဘွားကြီး Henychesk၊ Kherson ဒေသတွင်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ဆန့်တန်းကာ စစ်သားများထံ ချဉ်းကပ်ကာ ၎င်းတို့ကို ဤနေရာတွင် အလိုမရှိဟု ပြောခဲ့သည်။ သူမ အိတ်ကပ်ထဲသို့ ရောက်သွားကာ နေကြာစေ့များကို ထုတ်ယူကာ စစ်သားများ၏ အိတ်ကပ်ထဲတွင် ထည့်ရန် ကြိုးစားကာ ဤမြေပေါ်တွင် စစ်သားများ သေဆုံးသောအခါ ပန်းများ ပွင့်လာမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
သူမသည် လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွင် ပါဝင်နေသည်။ စစ်သားသည် စိတ်မသက်မသာဖြစ်ပြီး တုန်လှုပ်ချောက်ချားကာ သူမနှင့် ဆက်ဆံရန် ဝန်လေးနေသည်။ ဒါပေမယ့် သူမဟာ တင်းမာမှု၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့စွာ ဆက်ရှိနေတယ်။
ဤအခြေအနေ၏ရလဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသော်လည်း၊ ဤထပ်ခါတလဲလဲအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားများသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အင်အားစုများ၏အပြုအမူကိုမည်ကဲ့သို့ပုံဖော်သည်ကိုပညာရှင်များကသတိပြုမိကြသည်။ စစ်တပ်တွင်းရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် လှုပ်ရှားနိုင်သော သတ္တဝါများဖြစ်ကြပြီး ၎င်းတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက် အားနည်းသွားနိုင်သည်။
အခြားနိုင်ငံများတွင် ဤဗျူဟာထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ပုန်ကန်မှုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ Otpor ရှိ ဆားဘီးယား လူငယ် များသည် ၎င်းတို့၏ စစ်ဘက် ပြိုင်ဘက်များအား "မင်း ငါတို့နဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ အခွင့်အရေး ရမှာပါ" ပစ်မှတ်ထားရန် သူတို့သည် ဟာသများ၊ ဖိလစ်ပိုင်တွင် အရပ်သားများသည် စစ်တပ်ကို ဝိုင်းရံကာ ၎င်းတို့၏ သေနတ်များတွင် ဆုတောင်းခြင်း၊ အသနားခံခြင်းနှင့် အထင်ကရ ပန်းများ ပေးကြသည်။ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အများအပြားက ပစ်သတ်ရန် ငြင်းဆိုထားသောကြောင့် ကတိကဝတ်များ ပြေပျောက်ခဲ့သည်။
အလွန်သက်ဆိုင်သော စာသားတွင် "အရပ်သားအခြေခံကာကွယ်ရေး” လို့ Gene Sharp က ပုန်ကန်မှုရဲ့ အစွမ်းနဲ့ အရပ်သားတွေရဲ့ အစွမ်းအစတွေကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ “၁၉၀၅ ခုနှစ်နှင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၁၇ ခုနှစ်တို့၏ အကြမ်းမဖက်သော ရုရှားတော်လှန်ရေးများကို ဖိနှိပ်ရာတွင် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ပုန်ကန်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့သည် ဆာအစိုးရ၏ အားနည်းမှုနှင့် နောက်ဆုံးကျဆုံးခြင်းအတွက် အလွန်အရေးကြီးသောအချက်များဖြစ်သည်။”
၎င်းတို့အား ခုခံရန် ပစ်မှတ်ထားလာသည်နှင့်အမျှ Mutin များသည် ၎င်းတို့၏တရားဝင်မှုကို ပျက်ပြားစေရန် ကြိုးပမ်းခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ လူသားဆန်မှုကို ဆွဲဆောင်ရန် ကြိုးစားခြင်း၊ ကြာရှည်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသော ကတိကဝတ်များဖြင့် တူးဖော်ခြင်းနှင့် ကျူးကျော်သူသည် ဤနေရာတွင် လုံးဝမသက်ဆိုင်သည့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဇာတ်ကြောင်းကို ဖန်တီးသည်။
အက်ကွဲကြောင်းလေးတွေ ပြနေပြီ။ စနေနေ့က Perevalne ခရိုင်းမီးယား၊ Euromaidan သတင်းစာ “ရုရှားတပ်သားတစ်ဝက်လောက်က ထွက်ပြေးပြီး စစ်မတိုက်ချင်ဘူး” လို့ အစီရင်ခံပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံသော စည်းလုံးညီညွတ်မှု မရှိခြင်းသည် အမြတ်ထုတ်နိုင်သော အားနည်းချက်ဖြစ်သည်— အရပ်သားများက ၎င်းတို့အား လူသားမဆန်စွာ နှိမ့်ချရန် ငြင်းဆန်ပြီး ၎င်းတို့အား အနိုင်ယူရန် မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းလာသောအခါ တိုးများလာသည်။
Internal resistance သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။
အရပ်သား တော်လှန်ရေးသည် အလွန်ကြီးမားသော ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရုရှားမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေက အရေးကြီးတယ်။ အဖြစ်များသည်။ စစ်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူ ၁၈၀၀ ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ရုရှားနိုင်ငံအနှံ့ ဆန္ဒပြနေစဉ်။ ၎င်းတို့၏ သတ္တိနှင့် စွန့်စားမှုသည် ပူတင်၏လက်ကို လျော့နည်းစေသည့် ချိန်ခွင်လျှာကို ထိပ်ဖျားဖြစ်စေနိုင်သည်။ အနည်းဆုံးတော့၊ ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ ယူကရိန်းအိမ်နီးချင်းများကို လူသားဆန်စေရန်အတွက် နေရာပိုဖန်တီးပေးသည်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းက ဆန္ဒပြမှုတွေက အစိုးရတွေကို နောက်ထပ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့ ဖိအားတွေ တိုးလာပါတယ်။ ယင်းတို့သည် မကြာသေးမီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ EU၊ UK နှင့် US တို့သည် ရုရှားဘဏ်အချို့ကို SWIFT မှ ဖယ်ရှားရန်ငွေလဲလှယ်ရန် ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းပေါင်း 11,000 ၏ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကွန်ရက်ဖြစ်သော — ထို့နောက် ပိုမိုဖိအားများပေးနိုင်ရန်၊ ရုရှားဗဟိုဘဏ်၏ အရန်ငွေများကို အေးခဲစေသည်။.
ရုရှားထုတ်ကုန်များအပေါ် ကော်ပိုရိတ်သပိတ်မှောက်မှု အများအပြားကို ရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးက ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပြီး အချို့မှာ အရှိန်ရလာသေးသည်။ ကော်ပိုရိတ်ဖိအားအချို့သည် Facebook နှင့် Youtube တို့ဖြင့် ပြေပျောက်နေပြီဖြစ်သည်။ RT ကဲ့သို့သော ရုရှားဝါဒဖြန့်ချိရေးစက်များကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။.
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ပင်မသတင်းမီဒီယာများသည် အရပ်သားခုခံမှုသတင်းများကို မြှင့်တင်ရန် အားကိုးမရနိုင်ပေ။ ထိုနည်းဗျူဟာများနှင့် နည်းဗျူဟာများကို ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် အခြားချန်နယ်များတွင် မျှဝေရမည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နယ်ချဲ့ဝါဒကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် တွန်းလှန်သူများကို ဂုဏ်ပြုရင်း ယူကရိန်းရှိ ပြည်သူများ၏ ရဲစွမ်းသတ္တိကို ဂုဏ်ပြုပါမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယခုလောလောဆယ်တွင်၊ ပူတင်သည် ၎င်းတို့အား ၎င်း၏အန္တရာယ်အတွက် ရေတွက်နေပုံရပြီး - ယူကရိန်း၏ လျှို့ဝှက်လက်နက်မဲ့ အရပ်သားခုခံမှုလက်နက်သည် ၎င်း၏ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့် ဗျူဟာမြောက် ထက်မြက်မှုကို သက်သေပြရန် စတင်နေပြီဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့မှတ်စု− ကွန်မြူနတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရသည့်အကြောင်းနှင့် တင့်ကားများ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်းဆိုင်ရာ အပိုဒ်ကို ထုတ်ဝေပြီးနောက် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့မှာ, အကိုးအကားအဖြစ် New York Times ကို လမ်းဆိုင်းဘုတ်များ ပြောင်းလဲနေကြောင်း သတင်းပို့ခြင်း။ နောက်ဆုံးရသတင်းများကို ထင်ဟပ်စေရန် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုဆိုင်ရာ စာပိုဒ်ကို မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Daniel မုဆိုး is the Global Trainings Manager at 350.org Sunrise Movement နှင့်အတူ သင်ရိုးဒီဇိုင်နာတစ်ဦး။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ၊ ဆီရာရာလီယွန်ရှိ သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိ လွတ်လပ်ရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများထံမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ “စာအုပ်တွေ အများကြီးရေးတယ်၊ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်သော လက်စွဲစာအုပ်"နှင့်"သစ်ဂျင်မ် Crow အဘိဓါန်ရပ်တန့်ရန်လှုပ်ရှားမှုတည်ဆောက်ခြင်း။ "
အရပ်ဘက်အခြေခံ ကာကွယ်ရေးဖြင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေး
Gene Sharp မှ
“အရပ်ဘက်အခြေခံကာကွယ်ရေးဖြင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေး” စာအုပ်ကို ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
စစ်ရေးအရ ဟန့်တားမှုနှင့် ကာကွယ်ရေးမူဝါဒများကို တင်ပြရန် အခြားရွေးချယ်စရာများ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း လူအများက ယုံကြည်လာကြသည်။ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ယူဆချက်များနှင့် နည်းလမ်းများ ၏ ဆက်စပ် အနေအထား တွင် အခြားရွေးချယ်စရာများကို အများအားဖြင့် ရှာဖွေနေကြဆဲဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်အထိ ၎င်းတို့ထက် သာလွန်ခဲပါသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာများကို ရှာဖွေခြင်းသည် အရေးကြီးပြီး ပြင်းထန်ရန် လိုအပ်သည်။ လက်ရှိမူဝါဒများသည် ၎င်းတို့၏ ကြီးလေးသောကန့်သတ်ချက်များဖြင့်သာလွန်သောအစားထိုးမူဝါဒများတည်ရှိပြီး ကျယ်ပြန့်စွာသိရှိပါက ထောက်ခံသူအနည်းငယ်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်၊ လက်ရှိနှင့် လာမည့်မူဝါဒများ၏ ကောင်းကျိုးများနှင့် အားနည်းချက်များကို ငြင်းခုံနေခြင်း သို့မဟုတ် စစ်ပွဲနှင့် ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ရပ်တည်ချက်များ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ လုံလောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းအင်များကို ပြေပျောက်စေမည့်အစား ၎င်းတို့အား ထိရောက်သော အခြားရွေးချယ်စရာများ ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် လူထုသိရှိစေရန် ဖြန့်ကျက်ခြင်းအပေါ် အဓိကအာရုံစိုက်သင့်ပါသည်။
ဤစာအုပ်ငယ်သည် ယင်းကဲ့သို့သော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်သည်- အရပ်သားအခြေခံကာကွယ်ရေး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ သိမ်းပိုက်ခံရမှုများနှင့် ပြည်ပကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုများကို ပြည်သူများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အကြမ်းမဖက်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ပြင်ဆင်ထားသည့် အကြမ်းမဖက်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တိုက်ခိုက်သူများ၏ ရည်မှန်းချက်များကို ငြင်းဆိုနိုင်စေရန်၊ နိုင်ငံရေးအရ အရည်းအမ်းမခံသော အာဏာရှင်များ ဖြစ်လာစေရန်နှင့် တိုက်ခိုက်သူများ၏ တပ်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို မယုံကြည်နိုင်မှုနှင့် တပ်တွင်းပုန်ကန်မှုတို့ကိုပင် ဖြိုခွဲရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောပြင်ဆင်ထားသောစွမ်းရည်သည် တိကျစွာရိပ်မိပါက မတူညီသောအဟန့်အတားတစ်မျိုးကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်- ထိုသို့သောကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ကိုရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိမည့်ရန်လိုသူများသည် အဝေးမှနေရန်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်သည်။
ဤမူဝါဒသည် ဥရောပနိုင်ငံအများအပြားတွင် အစိုးရဆိုင်ရာ လေ့လာမှုအဆင့်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ မြောက်အမေရိကတွင် အာရုံစူးစိုက်မှု ကြီးထွားလာသည်။
အရပ်ဘက်အခြေပြု ကာကွယ်ရေးသည် ပန်ကာဆေးမဟုတ်သလို ယုံကြည်သူများ ရှာဖွေရမည့် အယူဝါဒလည်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ၎င်း၏အသုံးချမှု၊ ပြဿနာများနှင့် အလားအလာများအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူပါက ၎င်းသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သင့်သည်ဟု အခြားသူများအား အကြံပြုလိုပါသည်။ ပိုမိုကြီးမားသော အသိပညာနှင့် နားလည်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ မူဝါဒကို ထိရောက်မှု မရှိနိုင် သို့မဟုတ် အသုံးချ၍မရဟု ငြင်းပယ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ရန်လိုမှုနှင့် စစ်ပွဲပြဿနာ နှစ်ခုစလုံးကို ဖြေရှင်းနိုင်စေရန် အခြေခံစွမ်းရည်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဤစာအုပ်ငယ်သည် မိန်းမှနယူးမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှ နိုင်ငံအသီးသီးရှိ ဒေသအသီးသီးရှိ ဟောပြောပွဲခရီးစဉ်အတွင်း ကျွန်ုပ်ထံတင်ပြခဲ့သော အစားထိုးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုပ်ထုတ်ဝေမှုအတွက် လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြချက်များအတွက် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ ဤစာအုပ်ငယ်သည် အရပ်သားအခြေခံကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ နိဒါန်းမျှသာဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို စိတ်ပါဝင်စားသောသူများ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် အကြံပြုထားသော စာစောင်များကိုလည်း လေ့လာရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ မူဝါဒဆိုင်ရာ သတင်းလွှာနှင့် အခြားပညာရေးဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များကို လက်နက် လွှဲပြောင်းခြင်း လေ့လာရေးအသင်း၊ 3636 Lafayette Avenue၊ Omaha၊ Nebraska 68131 မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ဤစာအုပ်ငယ်၏ အဓိက အက်ဆေးကို War/Peace Report (New York)၊ April 1970 တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်၏ Exploring Nonviolent Alternatives (Boston: Porter Sargent Publishers, 1970) တွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ မူရင်းခေါင်းစဉ်မှာ “လက်နက်မကိုင်ဘဲ အမျိုးသားကာကွယ်ရေး” ဖြစ်သည်။ Theessayhaslargelystood thetesting thetesting of the time of the Essayhaslargelystood thetest of the time of the Essayhaslargelystood thetest of the time has been added to many ခိုင်မာသောဆွေးနွေးမှုများနှင့်ဤထုတ်ဝေမှုအတွက်အနည်းငယ်တည်းဖြတ်မှုလိုအပ်ပါသည်။
"အရပ်ဘက်အခြေပြုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသနနယ်ပယ်နှင့် မူဝါဒလေ့လာရေး" သည် ခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ယခင်ထုတ်ဝေခဲ့သော စာတမ်းနှစ်စောင်၏ နောက်ထပ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်- (1) SC Biswas၊ အယ်ဒီတာ၊ ဂန္ဒီရှိ "သုတေသနနယ်မြေများ၊ ပြဿနာများနှင့် အရပ်ဘက်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အလားအလာများ" သီအိုရီနှင့် လက်တွေ့၊ လူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ခေတ်ပြိုင်ဆက်စပ်မှု- ညီလာခံတစ်ခု၏ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မှုများ။ Indian Institute of Advanced Study၊ Volume Eleven (Simla: Indian Institute of Advanced Study၊ 1969)၊ စစ. 393-413; နှင့် (၂) ကျွန်ုပ်၏ အကြမ်းမဖက်သော အခြားရွေးချယ်စရာများကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်း ၊ စစ.
များပြားလှသော သုတေသနပြဿနာများနှင့် အကြောင်းအရာများကို ဆောင်းပါးများ၊ စာတိုပေးပို့မှု၊ စာပေးစာယူနှင့် စကားဝိုင်းများတွင် လူအများအပြားက နှစ်များတစ်လျှောက် အကြံပြုချက်များမှ ဤပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ အထူးသဖြင့် ကွယ်လွန်သူ Hon Philip Bogdonoff ကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Alastair Buchan၊ April Carter၊ Theodor Ebert၊ Robert Irwin၊ Irving Janis၊ Jessie Jones၊ Jessie Jones၊ Daniel Katz၊ Herbert Kelman၊ Julia Kittross၊ Christopher Kruegler၊ Ronald McCarthy၊ Charles Nathan၊ Robert Nozick၊ ကွယ်လွန်သူ Lars Porsholt၊ Adam Roberts၊ Theodor Roszak၊ Sandi Mandeville Tate၊ Kenneth Wadoski နှင့် Kurt H.Wolff။ မရည်ရွယ်ဘဲ စာရင်းမသွင်းထားသူများ အားလုံးကို တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ဤစာအုပ်ငယ်၏ အသုံးဝင်မှုကို တိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် တွေးခေါ်မှု၊ လေ့လာမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အထောက်အကူများစွာကို ထည့်သွင်းထားသည်။
တည်းဖြတ်မှုဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည် David H. Albert၊ Philip Bogdonoff၊ Robert Irwin နှင့် John McLeod တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Philip Bogdonoff က ခေါင်းစဉ်ကို အကြံပြုခဲ့သည်။
ပညာရှင် Gene Sharp
Program on Nonviolent Sanctions in Conflict and Defense Center for International Affairs၊
ယူကရိန်း- စိုးရိမ်သောက ကြေညာချက်၊ တည်ငြိမ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုချက်၊ ကျောင်းသားများကို ပန်ကြားချက်
New Pax Christi ဥက္ကidents္ဌများသည်ချာ့ချ်၏အကြမ်းမဖက်သောသွန်သင်ချက်များကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားသည်
စက်တင်ဘာလ 15, 2019 သတင်းနှင့်အထူးများ 1
နိုင်ရိုဘီရှိစိန့်ပေါလ်တက္ကသိုလ်၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပconflictိပက္ခလေ့လာရေးပါမောက္ခ Sr ။ Teresia Wamuyu Wachira သည်အဖွဲ့အစည်း၏တွဲဖက်ဥက္ကpresident္ဌအဖြစ်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
ဧပြီလ 15, 2022 သဘော 1
အကြမ်းမဖက်ရေးသင်ကြားရေး - ကျောင်းသားများသည်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုသင်ခန်းစာများကိုလေ့လာကြသည် (Nagaland, India)
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2016 လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံစာများ 0
အကြမ်းမဖက်ရေးသင်ခန်းစာများသည်မကြာသေးမီကကိုဟီမာနှင့် Dimapur တို့တွင်သီးခြားပညာရေးဆိုင်ရာဟောပြောချက်နှစ်ခုကိုအဓိကထားခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်မှပါမောက္ခနှစ်ယောက်သည်မကြာသေးမီကဇန်နဝါရီ ၂၅ တွင် Kingian အကြမ်းမဖက်ပConိပက္ခပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက်နိဒါန်းလေ့ကျင့်ရေးအတွက် St. Kohima ရှိ St. Joseph ကောလိပ်တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ Rhode Island တက္ကသိုလ်ရှိအကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ၏ဒါရိုက်တာ Dr. Paul Bueno de Mesquita နှင့်သူ၏ဇနီးနှင့်အကြမ်းမဖက်ပူးတွဲသင်တန်းဆရာပါမောက္ခ၊ ကေးဂျွန်ဆင် - ဘူနိုဒီမက်ကွီတာတို့ ပူးပေါင်း၍ ကျောင်းသားပေါင်း ၅၀၀ ကျော်အားဒyနိကဗေဒအားသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ မဟတ္တမဂန္ဒီကအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးခဲ့သောဒေါက်တာ King ၏အခြေခံမူများ။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]